ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အန္တရာယ် - ယူခြင်းအပေါ်လူမှုရေးအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင် (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အန္တရာယ်-ရိုက်ယူခြင်း (2008) ရက်တွင်တစ်ဦးကလူမှုအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင်
dev ဗျာ 2008 Mar;28(1):78-106.
Steinberg L ကို.
ဤဆောင်းပါးသည်သီအိုရီများနှင့်ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်သုတေသနပြုများအတွက်မူဘောင်အဆိုတင်သွင်း အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခြင်းဖြင့်အကြောင်းကြားဖြစ်ပါတယ် neuroscience။ နှစ်ဦးကအခြေခံမေးခွန်းများကိုဤသုံးသပ်ချက်ကိုလှုံ့ဆျောပေး။ F ကိုirst, အဘယ်ကြောင့်မ အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားတိုးမြှင့? ဒုတိယအချက်အဘယျကွောငျ့မ အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားကျဆင်း?
စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေ ဦး နှောက်၏လူမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်တွင်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်များ၌ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားတိုးများလာသည်။ အထူးသဖြင့်ရွယ်တူချင်းများရှေ့တွင် ဦး နှောက်၏ dopaminergic စနစ်ကိုအကြီးအကျယ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကြောင့်လောင်စာရရှိမှုတိုးပွားလာစေသည်။
စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေ ဦး နှောက်၏သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်နှင့်လူကြီးများအကြားကျဆင်းမှု - တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေသောပြောင်းလဲမှုများ။
ဤပြောင်းလဲမှုများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအနှံ့ပေါ်ပေါက်ခြင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် prefrontal cortex အတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်အခြားဦးနှောက်ဒေသများတွင်၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုတွင်တွေ့မြင်ရသည်။ ဤပြောင်းလဲမှု၏မတူညီသောအချိန်ဇယားအန္တရာယ်များနှင့်မဆင်မခြင်အပြုအမူမှကြီးထွားအားနည်းချက်၏ Mid-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အချိန်ပါစေ။
keywords: မြီးကောင်ပေါက်, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ, လူမှုရေးမှ neuroscience, ဆုလာဘ်-ရှာ, Self-စည်းမျဉ်း, prefrontal cortex, သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဆုံးဖြတ်ချက်ချ, dopamine, oxytocin, ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု
ဒါဟာကျယ်ပြန့်စက်မှုထွန်းကားတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လူငယ်များ၏သုခချမ်းသာဖို့အကြီးမြတ်ဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုများအတူတူနီးပါးများအတွက်အကောင့်ရသောမော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားမတော်တဆမှု (အပါအဝင်ကာကွယ်နိုင်သောနှင့်မကြာခဏ Self-ရက်စက်မှုအကြောင်းတရားများကလာသောဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၏လေ့လာမှုမှာကျွမ်းကျင်သူများအကြားသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အမေရိကန်လူငယ်များအကြားအားလုံးသေဆုံးမှု၏တစ်ဝက်), အကြမ်းဖက်မှု, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ယူပြီး (Blum & နယ်လ်ဆင် -Mmari, 2004; Williams က et al ။ , 2002) ။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတိုးတက်မှုကဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအကြားရောဂါနှင့်နာတာရှည်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုကိုဖန်ဆင်းထားပြီးစဉ်ထို့ကြောင့်အလားတူအကျိုးအမြတ်အတွက်ရောဂါလျှော့ချဖို့လေးစားမှုနဲ့သေဆုံးမှုတွေနဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့ကြပြီမဟုတ်အန္တရာယ်များနှင့်မဆင်မခြင်အပြုအမူကနေဖြစ်ပေါ်ကြောင်း (ဟိန်း, 1988) ။ ထိုကဲ့သို့သောအရက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာမောင်းနှင်သို့မဟုတ်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံအဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအချို့အမျိုးအစားများ၏နှုန်းထားများ, ကျဆင်းသွားခဲ့ကြပေမဲ့, ဆယ်ကျော်သက်အကြားအန္တရာယ်များအပြုအမူများပျံ့နှံ့မြင့်မားနေဆဲများနှင့်အများအပြားအတွက်မြီးကောင်ပေါက် '' အန္တရာယ်အပြုအမူမကျဆင်းမှုရှိခဲ့သည် နှစ်ပေါင်း (ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး, 2006 အဘို့အစင်တာများ).
အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ပြင်းအားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်တိကျသောအန္တရာယ်တစ်ခု function ကိုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်အသုံးပြုသည် "မြီးကောင်ပေါက်" နှင့် "လူကြီးများ" ၏အသက်အရွယ်အဖြစ်ကွဲပြားပေမယ့်ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းကိုလည်းအမှုဖြစ်ပါသည် အုပ်စုများ; အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏နှုန်းထားများမြီးကောင်ပေါက်အဖြစ်ခွဲခြားစေခြင်းငှါအချို့အဘယ်သူကိုနှင့်အချို့သောလူကြီးများအဖြစ်ခွဲခြားစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ဥပမာ 18 နှစ်အရွယ်, မှ 21- တို့တွင်အမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အထွေထွေစည်းမျဉ်းအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအရာများ၏အများစု, Bing သောက်ရန် 25 ကျော်လူကြီးများထက်ပိုများပါတယ်, မီးခိုးစီးကရက်, ပေါ့ပေါ့လိင်မိတ်ဖက်ရှိသည်, အကြမ်းဖက်များနှင့်အခြားရာဇဝတ်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်ဆိုးဝါးသို့မဟုတ်အလေးအနက်မော်တော်ယာဉ်မတော်တဆမှုများ အရက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာအန္တရာယ်များမောင်းနှင်မှုသို့မဟုတ်မောင်းနှင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နေကြသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အစပျိုးအန္တရာယ်အပြုအမူပုံစံအမျိုးမျိုးလူကြီး (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု) အတွက်အပြုအမူများအတွက်အန္တရာယ်ခြီးမွှောသောကြောင့်, နှင့်မြီးကောင်ပေါက်နေဖြင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအချို့ကိုပုံစံများကိုစွန့်စားမှု (ဥပမာမဆင်မခြင်မောင်းနှင်မှု, ပြစ်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ) မှာအခြားသောကာလ၏တစ်ဦးချင်းစီထားသောကြောင့်, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများက (လူငယ်များနေဖြင့်နှုန်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေလျှော့ချလူဦးရေရဲ့အလုံးစုံသုခချမ်းသာအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုစေမယ်လို့သဘောတူSteinberg, 2004).
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေလျှော့ချဖို့အဓိကချဉ်းကပ်နည်းသူတို့ထဲကအများစုဟာကျောင်းက-based ပညာပေးအစီအစဉ်များ, မှတစ်ဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီအားထုတ်မှု၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အလွန်အမင်းသံသယဖြစ်အကြောင်းပြချက်သို့သော်ရှိပါတယ်။ AddHealth အချက်အလက်များအရ (Bearman, ဂျုံးစ်, & Udry, 1997), လုနီးပါးအားလုံးအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများအားဖြင့်ကောက်ယူဆေးလိပ်သောက်, အရက်သောက်, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလျှော့ချဖို့ဒီဇိုင်းပညာရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအချို့ကိုပုံစံပေမယ့်လူငယ်အန္တရာယ်အပြုအမူစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်များ၏လတ်တလောအစီရင်ခံစာ, ရရှိထား အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးထက်ပို-တတိယကွန်ဒုံးဖြစ်စေပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပင်နောက်ဆုံးသောကာလကိုမသုံးခဲ့ပါကြောင်းနှင့်ကြိုတင်စစ်တမ်းမှယခုနှစ်ကာလအတွင်းမြီးကောင်ပေါက်နီးပါး 30% တစ်ဦးကားထဲတွင်စီးကွောငျးဖျောပွသ 25% မူးရူးသောက်စား၏မျိုးစုံဖြစ်စဉ်များအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, နီးပါး 25% (ပုံမှန်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့ကြသည်ထက်ပိုမိုသောက်သုံးခဲ့သူတစ်ဦးကမောင်းထုတ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး, 2006 အဘို့အစင်တာများ).
အဲဒါကိုကဤပညာရေးဆိုင်ရာအားထုတ်မှု, မီတာများအတွက်မအခြေအနေကပင်ပိုမိုဆိုးရွားဖြစ်အံ့သောငှါ, သင်တန်း, မှန်ပေမယ့်ကျန်းမာရေးပညာရေးအပေါ် ost စနစ်တကျသုတေသနပြုပင်ကိုအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များကို ပို. အောင်မြင်သောပြောင်းလဲနေတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ '' အသိပညာမှာ၎င်းတို့၏အပြုအမူပြောင်းလဲထက်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ (Steinberg, 2004, 2007) ။ အမှန်မှာနှစ်စဉ်ဆယ်ဘီလီယံကျော်ကျော်သည်ဆယ်ကျော်သက်များအားဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း၊ အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်မှုအန္တရာယ်များအကြောင်းပညာပေးရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ အခွန်ထမ်းပြည်သူအများစုသည် DARE (Ennett, Tobler, Ringwall, & Flewelling, 1994) ကဲ့သို့သောအလုပ်မလုပ်သောကျန်းမာရေး၊ လိင်နှင့်ယာဉ်မောင်းပညာရေးအစီအစဉ်များတွင်အများပြည်သူအတွက်အသုံးစရိတ်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်းသိရသောအခါအံ့အားသင့်သွားပေမည်။ abstinence ပညာရေး (Trenholm, Devaney, Fortson, Quay, Wheeler, & Clark, 2007), သို့မဟုတ်ကားမောင်းသူသင်တန်း (အမျိုးသားသုတေသနကောင်စီ 2007), သို့မဟုတ် unproven သို့မဟုတ် unstudied ထိရောက်မှုအကောင်းဆုံးမှာ (Steinberg, 2007).
လူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များအပြုအမူ၏မြင့်မှုနှုန်း၎င်း၏အလားအလာအန္တရာယ်အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုဆယ်ကျော်သက်ပညာပေးရန်, အကြီးအကျယ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောနှင့်အကုန်အကျအားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်းအနည်းဆုံး 25 နှစ်ပေါင်းအများကြီး theorizing နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့်ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနများ၏အာရုံစူးစိုက်လာခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းအများစုမှာသိကောင်းစရာများ, ဒါပေမယ့်မမျှော်လင့်တဲ့လမ်းအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးလူငယ်၏ပိုပြီးမကြာခဏအန္တရာယ်များအပြုအမူကိုရှင်းပြမယ်လို့မြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအကြားခြားနားချက်များကိုရှာဖွေကြည့်ရှုရာယေဘုယျအားဖြင့်, သူတို့အချည်းနှီးသောလက်တက်လာကြပြီ။ ရှိသည်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ ပတ်သက်. ကျယ်ပြန့်-ကျင်းပယုံကြည်ချက်တွေထဲမှာ မဟုတ် မျက်မြင်လက်တွေ့ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံခဲ့
(က) မြီးကောင်ပေါက်သူတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အဓိပ်ပါယျမရှိသောသို့မဟုတ်လစ်လပ်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်အရွယ်ရောက်ထက်အခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာအန္တရာယ်အကြောင်းကိုသူတို့အကြောင်းပြချက်ကြောင်းကို;
(ခ) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ပြုပါရှိရာအန္တရာယ်များကိုရိပ်မိ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ invulnerable ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့ပိုများပါတယ်မ; နှင့်
အဆိုပါယုတ္တိဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် 16 နှစ်အရွယ်၏အခြေခံသတင်းအချက်အလက်-အပြောင်းအလဲနဲ့စွမ်းရည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါ၏: ဤအအခိုင်အမာအဘယ်သူအားမျှမှန်ကန် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ကဲ့သို့အန္တရာယ်သိဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ခန့်မှန်းမှာလူကြီးများထက်မဆိုးရွားများမှာ (နှင့်, ကျော်လွန်) အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်အန္တရာယ်များခန့်မှန်း; နှင့်ဆင်းရဲသားသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအပေါ်နှိုင်းယှဉ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်အောင်နှင့်ဆက်နွယ်အန္တရာယ်များ၏ salience တိုးမြှင့် (Millstein & Halpern-Felsher, 2002; Reyna & Farley, 2006; Steinberg & Cauffman, 1996; Rivers, Reyna, & Mills, ဤပြissueနာကိုလည်းကြည့်ပါ) ။
အမှန်စင်စစ်အများဆုံးလေ့လာမှုများပြုလုပ်ငှါအကျိုးဆက်များ၏လေးနက်မှုအကြောင်းကို၎င်းတို့၏တရားစီရင်ပိုင်အတွက်မဆိုမိလျှင်, အန္တရာယ်ရှိတဲ့အပြုအမူတစ်ခုကျယ်ပြန့်အတွက်မွေးရာပါအန္တရာယ်များ၏တစ်ဦးချင်းစီ '' အကဲဖြတ်အတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု (အရက်မူးနေချိန်တွင်ဥပမာအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံ, ကားမောင်း), အနည်းငယ်ရှာတွေ့ အန္တရာယ်များအပြုအမူကနေရလဒ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဤလှုပ်ရှားမှုများ၏ဆွေမျိုးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြတ်အကဲဖြတ်ရန်သောနည်းလမ်း (Beyth-Marom et al ။ , 1993) ။ ပေါင်းလဒ်များတွင်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်လူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက် '' သာ. ကြီးမြတ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဝိဇ္ဇာ, ဆင်ခြင်မဲ့, invulnerability ၏ဘေးဥပဒ်, ဒါမှမဟုတ်ပျက်ယွင်းနေတွက်ချက်မှု (ထံမှရပ်တပါဘူးReyna & Farley, 2006).
သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး, တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့အဖြစ်, ယုတ္တိ, အဖြစ်မှန်-based, မိမိတို့အကွီးအကဲမြားအဖြစ်တိကျ - - ဒါပေမယ့်အဆင့်မြင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမြီးကောင်ပေါက်, တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ယုတ္တိ, အဖြစ်မှန်-based, သူတို့သည်အန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုစဉ်းစားထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းတိကျမှုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို လူကြီးများထက်အန္တရာယ်များအပြုအမူ၏နှုန်းထားများသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ယောဂီနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အရေးကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားပေါ်ပေါက်။ ယခင်အဘို့, ဒီလေ့လာရေးအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါထိုသို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားအပြောင်းအလဲများသောဤကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်အကောင့်အံ့သောငှါဖြစ်ပါသည်အဘယ်အရာကိုမေးမြန်းဖို့သောအချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကွဲပြားခြားနားထင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်း။ အဆုံးစွန်သောအဘို့ဟုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ပေးမယ့်လှဲမှားသောမဟာဗျူဟာဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု, ကြှနျုပျတို့လျှော့ချရည်ရွယ်အများပြည်သူကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ချက်အသစ်ချဉ်းကပ်မှုလိုအပျကွောငျးစောဒကတက်သည်, ပညာရေးကြားဝင်ဒါသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကန့်သတ်ပြီရှင်းပြကူညီပေးသည် ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-တာကကျနော်တို့ကိုပြောင်းလဲရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းမြီးကောင်ပေါက် '' အမှန်တကယ်အပြုအမူပါ။
သိပ္ပံနည်းကျနှင့်လက်တွေ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဤအစုံဤဆောင်းပါးကိုများအတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အထဲတွင်, ကျနော်အန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မြီးကောင်ပေါက်ဦးဆောင်လမ်းပြသောအချက်များမဟုတ်သိမြင်မှု, လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်; မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏လယ်ပြင်ရဲ့အထွန်းသစ်စနားလည်မှုကဤဘုံထဲမှာကျက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်း unalterable အခြေခံရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုမူထသော, နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေတားဆီးသို့မဟုတ် minimize လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုထို့ကြောင့်လက်ရှိအလေ့အကျင့်ပြုသကဲ့သို့အန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုအဘယ်အရာကိုမြီးကောင်ပေါက်ကိုသိနှင့်သူတို့ထင်သည့်နည်းလမ်းများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, ရာအရပ်ကိုကြာထက်အဓိကအားဖြင့်ကြိုးပမ်းထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်ပြောင်းလဲနေတဲ့အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်း။
ဆယ်ကျော်သက်များ၏ Developmental အာရုံကြောသိပ္ပံတိုးတက်လာ
နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ပုံစံများအတွက်ကြီးမားပြီးရေရှည်တည်တံ့အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြီးထွားလာအသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် functional ဖြစ်စေ Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging (MRI) ၏ကျဆင်းနေကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပျံ့ Tensor Imaging (DTI) ကဲ့သို့သောအခြားပုံရိပ်နည်းစနစ်က Enabled သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးတိုးချဲ့ကွန်ယက်ကိုအကြားဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုများများ၏သင်တန်းထွက် map မှစတင်ပါပြီ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီး, တစ်ဦးထက်ပိုကျိုးနွံဒီဂရီရန်, အမူအကျင့်ထဲမှာအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့ဦးနှောက်၏ပြောင်းလဲနေတဲ့ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုအပေါ် link ကိုတွေ့ရှိချက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ၏ဤကာလအတွင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုဖော်ပြရန်နှင့်။ ဒါကြောင့် "ဦးနှောက် overclaim" (စိုးရိမ်ကြီးပြင်းခဲ့ကြသူမြား၏သတိပေးထားပါတယ်နာပညာရှိဖြစ်သော်လည်းMorse က, 2006နှင့် reshaping - - ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များစံတန်ဖိုးကိုစဉ်းစားထားတဲ့အတွက်နည်းလမ်းများ (), ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုပုံဖော်ကြောင်းမျှသံသယရှိပါတယ်Steinberg, 2005) နှင့် atypical (Steinberg, Dahl, Keating, Kupfer, Masten, & Pine, 2006မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌) ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲမှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဝေးကဤ neurobiological အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအကြားအမှန်တကယ်လင့်များကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုထက်ကျော်လွန်ကြောင်းထောက်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ပြီး, ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူများ၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံအကြောင်းကိုကျမ်းစာလာသည်ကားအဘယ်အရာကိုများတာ - အပါအဝင် ဤဆောင်းပါး၏မျှတသောငွေပမာဏ - ငါတို့ကဲ့သို့သွင်ပြင်လက္ခဏာများစေခြင်းငှါ, အဘယ်သို့သောအမကြာခဏ, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ခေတ်တစ်ခေတ်ဖြစ်စဉ်များ "ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထင်ကြေး။ " - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ရေရှည်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်တိုးတက်မှုစဉ်အတွင်း prefrontal cortex ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဥပမာအားဖြင့် Synaptic တံစဉ်များကို - ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပင်ဟောင်း (ဦးနှောက်) မဟုတ်ဘဲပြောင်းပြန်ထက်, အဆုံးစွန်သော (အပြုအမူ) သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းပြသတာကိုလျော့နည်းဤဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းခက်ခဲဒေတာခြင်းမရှိဘဲနှင့်ဆက်စပ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံသို့မဟုတ် function ကိုပြောင်းလဲမှုများဤဖြစ်ရပ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကို attribute တစ်ခုကိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှု, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူ၏ရိုးရှင်းအကောင့်အကြောင်းကိုသတိထားရမည့်ထို့ကြောင့်ပညာရှိဖြစ်၏။ အချို့အသက်စာဖတ်သူများဦးနှောက်သလောက်, တံထွေး assay ဖျော်ဖြေများအတွက်နည်းစနစ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်မကြာမီပြီးနောက်နှစ်လယ်ပိုင်း 1980s အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစာပေ၌ထင်ရှားကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဟော်မုန်း-အပြုအမူဆက်ဆံရေး၏လေ့လာမှုသွင်ပြင်လက္ခဏာသောများစွာသောအချိန်မတန်မီတောင်းဆိုမှုများ၏သတိပေးနေကြပါတယ် ပုံရိပ်နည်းစနစ်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များတွင်ရှိသည်။ အိုတိုက်ရိုက်ဟော်မုန်း-အပြုအမူချိတ်ဆက်မှုအတွက်ရှာဖွေရေး (သိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများကမျှော်လင့်ခဲ့သောထက်ပိုပြီးခက်ခဲများနှင့်လျော့နည်းမြေသြဇာကောင်းသောသက်သေပြBuchanan, ဒေ, & Becker က, 1992), နှင့်အပြုအမူဖြစ်ပေါ်ရသောပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အေးစက်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအပေါ်ဟော်မုန်းအနည်းငယ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်; ပင်အဖြစ်ဟော်မုန်းလိင်စိတ်အဖြစ်မောင်းနှင်တစ်ခုခုသာ (လက်ျာဘက်အခြေအနေတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုSmith က Udry, & မောရစ်, 1985) ။ ဦးနှောက်-အပြုအမူဆက်ဆံရေးကိုမဆိုလျော့နည်းရှုပ်ထွေးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားရန်မအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ မဟုတ်မှသာနောက်ကျောဇီဝစိတ်ပိုင်းဖြတ်ချိန်းတွေ့အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရာအားလုံးရှင်းပြဖို့ပျက်ကွက်ကြိုးစားမှု၏ရှည်လျားသောသမိုင်း, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ရှိပါတယ် ခန်းမ (1904)ဒါပေမယ့်ကာလစောစောဒဿနကျမ်းမှ (Lerner & Steinberg, 2004) ။ ဤရွေ့ကားအတွက်အသိပေးချက်, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု (အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် functional ဖြစ်စေနှစ်ဦးစလုံး) နှင့်ဤကာလအတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေဦးနှောက်-အပြုအမူလင့်များအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာ၏လက်ရှိပြည်နယ်, သျောလညျးမပြည့်စုံ, ဆယ်ကျော်သက်များ၏လေ့လာမှုတွင် "ထွန်းသစ်စလမ်းညွန်" သို့အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်ကမ်းလှမ်းရန်မည်သို့ပင်ဆိုစေလုံလောက်ပေမယ့် အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ။
ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏လေ့လာမှုမှသက်ဆိုင်ရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအတွက်အရေးအပါဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန်နှင့်သီအိုရီများနှင့်အားဖြင့်အကြောင်းကြားကြောင်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ်သုတေသနများအတွက်အခြေခံမူဘောင်အထဲကဝိုငျးဝနျးဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience ။ ရှေ့ဆက်မီ, အမြင်၏ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်စကားများအမိန့်ရှိကြ၏။ မဆိုအပြုအမူဖြစ်ရပ်ဆန်းမျိုးစုံအဆင့်ဆင့်ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေချဉ်းကပ်နိုင်ပါတယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, (အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအခြေခံစေခြင်းငှါစိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုအတွက်တိုးမြှင့်အာရုံစိုက်), တစ်ဦး Contextual ရှုထောင့် (အန္တရာယ်များအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းလူ့ဖြစ်စဉ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်), သို့မဟုတ် တစ်ဇီဝရှုထောင့် (ထိုဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်, neurobiology, ဒါမှမဟုတ်အာရုံ-ရှာ၏မျိုးရိုးဗီဇအပေါ်အာရုံစူးစိုက်) ။ (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤအဆင့်ဆင့်အားလုံးအလားအလာသိကောင်းစရာများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဆယ်ကျော်သက် psychopathology အများစုပညာရှင်များစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏လေ့လာမှုကဤအမျိုးမျိုးသောချဉ်းကပ်မှုတို့တွင်အ Cross-fertilization ထံမှအကျိုးကိုမူကြောင်းကိုသဘောတူCicchetti & Dawson, 2002).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏ neurobiology အပေါ်မှာငါ့အလေးပေးသည့်ဖြစ်ရပ်ဆန်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် Contextual ရှုထောင့်လေ့လာနေ၏အရေးပါမှုကိုမှေးမှိန်စေရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, စိတ်ကျရောဂါမှအားနည်းချက်တိုးမြှင့်အံ့သောငှါမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် neuroendocrine လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အပြောင်းအလဲ (ဥပမာလေ့လာနေထက်မဆိုပိုပြီး Walker က, Sabuwalla, & Huot, 2004) အဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် Contextual မျှဝေသူလေ့လာဖို့လိုအပ်၏သရုပ်ဒါမှမဟုတ်နာမကျန်း၏ကုသမှု obviate လိမ့်မယ်။ မဟုတ်သလိုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏ neurobiology အပေါ်မှာငါ့အာရုံဇီဝဗေဒရှင်းလင်းချက်၏အခြားပုံစံများကိုကျော်ရှင်းပြချက်, ဒါမှမဟုတ်ဇီဝ reductionism တစ်ရင်တော့မှားမယ်ပုံစံစာရင်းသွင်းခြင်း၏အရေးပိုအတွက်ယုံကြည်ချက်ရောင်ပြန်ဟပ်ပါဘူး။ အချို့သော level မှာ, သင်တန်း, ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်တစ်ဇီဝအခြေခံထားပြီး, အဘယ်အရာကိုအရေးပါဇီဝအခြေခံနားလည်သဘောပေါက်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်းနားလည်ကူညီပေးသည်ရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏အမှတ်သျောဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေမဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီ (မယ့်မည်သည့် neurobiological သီအိုရီကျနော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအကြောင်းကိုသိနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်သင့်၏ကဲ့သို့) ဤအချိန်ကာလအတွင်းကျနော်တို့ neurobiological လုပ်ငန်းဆောင်တာအကြောင်းကိုသိနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ဖို့လိုသည်, ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏အများဆုံး extant စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီ, ငါ့မြင်ကွင်းထဲမှာကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိပေါ်သို့ကောင်းစွာ map ပါဘူး။ ဤအသီအိုရီကျနော်တို့ကိုသူတို့ကမှားဖြစ်ဖို့များပါတယ်, ဒါကြောင့်ကြာမြင့်စွာသူတို့ကြိုတင်ကာကွယ်ကြားဝင်၏ဒီဇိုင်းကိုအကြောင်းကြားရန်ဆက်လက်အဖြစ်, သူတို့ကထိရောက်သောဖြစ်ဖွယ်မရှိပေဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းကိုသိနှင့်အတူကိုက်ညီမှုဖြစ်ကြောင်းအတိုင်းအတာရန်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးကအခြေခံမေးခွန်းများကိုဤသုံးသပ်ချက်ကိုလှုံ့ဆျောပေး။ ပထမဦးစွာအဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေတိုးသလဲ ဒုတိယအချက်အဘယျကွောငျ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေကျဆင်းမှုသနည်း ငါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience နှစ်ဦးစလုံးမေးခွန်းများအဖြေတစ်ခုဆီသို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါသဲလွန်စကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်မဦးနှောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုရည်ညွှန်းသောအရာကိုအတွက်အပျိုဖော်ဝင်၏အချိန်န်းကျင်အပြောင်းအလဲများ၏ရလဒ်အဖြစ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားအကျဉ်း, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေတိုးအတွက် လူမှုစိတ်ခံစားမှုစနစ်က ကြောင်းအထူးသဖြင့်ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်-ရှာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မဦးနှောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုရည်ညွှန်းသောအရာကိုအတွက်အပြောင်းအလဲများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေကျဆင်းမှု သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏ - Self-စည်းမျဉ်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ '' စွမ်းရည်တိုးတက်စေရာသောအပြောင်းအလဲတဖြည်းဖြည်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီး၏သင်တန်းကျော်ပေါ်ပေါက်ရာ။ ဤပြောင်းလဲမှု၏မတူညီသောအချိန်ဇယား - အစောပိုင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရုတ်တရက်ဖြစ်သောဆုလာဘ်-ရှာထဲမှာတိုး, နှင့်တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အလယ်ပိုင်း 20s သည်အထိပြီးပြည့်စုံမရသောအရာ Self-စည်းမျဉ်းအရည်အချင်းကိုအတွက်တိုး, Mid-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အချိန်စေသည် အန္တရာယ်များနှင့်မဆင်မခြင်အပြုအမူမှကြီးထွားအားနည်းချက်၏။
ကြှနျတေျာ့အမွငျတှငျ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်တိုးအဓိကအားအပျိုဖော်ဝင်၏အချိန်ဝန်းကျင် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုပုံစံများပြောင်းလဲချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းအာရုံရှာထဲမှာတိုးမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံခံစားမှု-ရှာ၌ဤတိုးအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူတော့သည်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ငါရှင်းပြရကြလိမ့်မည်အဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာသို့သော်ကြောင့်လုံးဝကျယ်ပြန့်ယူဆအတိုင်း, ဤအခြိနျတှငျရာအရပ်ကိုကြာကြောင်း gonadal ဟော်မုန်းအတွက်တိုးလာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မပေးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နေရာယူကြောင်းအာရုံ-ရှာထဲမှာတိုးအချိန်နဲ့တပြေးညီအသက်အရွယ်နှင့်အတူထက် pubertal ရငျ့ပိုမိုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းအချို့သက်သေအထောက်အထားများ (ရှိမာတင်ကယ်လီ, Rayens, Brogli, Brenzel, စမစ်, et al ။ , 2002), အရာ pubertal ရငျ့မှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စဉ်းစားပြောင်းလဲမှုများချိတ်ဆက်မျှသက်သေအထောက်အထားရှိကွောငျးပေးတစ်ခုတည်းကိုသာသိမြင်မှုဖြစ်ကြောင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏အကောင့်ဆန့်ကျင်စောဒကတက်သည်။
အပျိုဖော်ဝင်စမှာ Dopaminergic စနစ်၏ပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေး
အဆိုပါ dopaminergic စနစ်တွင်အရေးကြီးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို (အပျိုဖော်ဝင်စမှာနေရာတစ်နေရာယူကုန်သည်များ et al ။ , 2003; လှံ, 2000) ။ ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစည်းမျဉ်းထဲမှာ dopaminergic လှုပ်ရှားမှု၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားသောဤအပြောင်းအလဲများကိုဖွယ်ရှိမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် socioemotional ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသင်တန်းပုံဖော်, လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအဘို့အ coding အခြေခံသည့်ကွန်ရက်များပေါ်တွင်မှီခိုသောကွောငျ့။ ဤအကွန်ရက် Key ကို node များ (ထို amygdala, နျူကလိယ accumbens, orbitofrontal cortex, medial prefrontal cortex နှင့်သာလွန်ယာယီ sulcus ပါဝင်နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2005) ။ ဤရွေ့ကားဒေသများလူမှုရေးအရသက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (ဥပမာမျက်နှာများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအပါအဝင်, လူမှုရေးအပြောင်းအလဲနဲ့၏ကွဲပြားခြားနားရှုထောင့်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ ဟော့ဖ်မန်း & Haxby, 2000; ဇီဝလှုပ်ရှားမှု, Heberlein et al ။ , 2004), လူမှုရေးတရားစီရင်ပိုင် (အခြားသူများရဲ့အကဲဖြတ်, Ochsner, et al ။ , 2002; ဆွဲဆောင်မှုစီရင်တော်, အာရုန်, et al ။ , 2001; ပြိုင်ပွဲအကဲဖြတ်, Phelps et al ။ , 2000; အခြားရည်ရွယ်ချက်အကဲဖြတ်, Gallagher, 2000; Baron-Cohen ကို et al ။ , 1999), လူမှုရေးဆင်ခြင်ခြင်း (Rilling et al ။ , 2002), နှင့်လူမှုရေးအပြောင်းအလဲနဲ့၏များစွာသောအခြားရှုထောင့် (ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ အဒေါ့ဖ်, 2003) ။ အရေးကြီးတာက, မြီးကောင်ပေါက်အကြားလူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း activated သောဒေသများ (စထိုသို့သော ventral striatum နှင့် medial prefrontal ဒေသများအဖြစ်ဆုလာဘ်ပြင်းအားအတွက်မူကွဲမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပြဒေသများနှင့်အတူသိသိသာသာထပ် cf. သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005; Knutson et al ။ , 2000; May et al ။ , 2004) ။ အမှန်စင်စစ်လက်ခံမှုနှင့်ငြင်းပယ်ခံရစေ့စေ့ကြည့်ရှုသည့်အတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်စေ့စပ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လတ်တလောလေ့လာမှုစမ်းသပ်မှုတွေအ (ခြယ်လှယ်ခဲ့ကြသည်နယ်လ်ဆင် et al ။ , 2007) ဘာသာရပ်များလက်ခံမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုထိတွေ့သောအခါ သာ. ကြီးမြတ် activation ထင်ရှား, ငြင်းပယ်ခံရမှဆွေမျိုး, ဦးနှောက်ဒေသများအတွင်းဆုလာဘ် salience ်ပတ်သက်နေ (ဆိုလိုသည်မှာယင်း ventral tegmental ဧရိယာတိုးချဲ့ amygdala နှင့် ventral pallidum) ။ ဤအတူညီဒေသများဆုလာဘ်-related များစွာသောလေ့လာမှုတွေ်ပတ်သက်နေကြောင့်ထိခိုက်စေ ( cf. , Berridge, 2003; Ikemoto & ပညာရှိ, 2004; Waraczynski, 2006) ဤတွေ့ရှိချက်များ (အနည်းဆုံးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌, ရွယ်တူချင်းအားဖြင့်လူမှုရေးလက်ခံမှု nonsocial ဆုလာဘ်အပါအဝင်ဆုလာဘ်၏အခြားအမြိုးမြိုးနဲ့ဆင်တူနည်းလမ်းတွေထဲမှာလုပ်ငန်းများ၌စေခြင်းငှါ, ထိုအကြံပြုနယ်လ်ဆင် et al ။ , 2007) ။ ငါနောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြအဖြစ်, လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖျန်ဖြေသောအာရုံကြောဆားကစ်များအကြားကဒီထပ်ဤမျှလောက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေသည့်သက်တူရွယ်တူအုပ်စုတစ်စု၏အခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်ရှင်းပြဖို့ကူညီပေးသည်။
လူမှု-စိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်ကိုအတွင်း dopaminergic စနစ်၏ပြုပြင်ထားတဲ့ကနဦး Post-Natal မြင့်တက်ပြီးတော့အသက်9သို့မဟုတ် 10 နှစ်ပေါင်းတစ်ဝှမ်းမှာစတင်, အ striatum နှင့် prefrontal cortex အတွက် dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆတစ်နောက်ဆက်တွဲလျှော့ချရေး, သောအသွင်ပြောင်းပါဝငျသညျ ပိုပြီးသိသာ (အနည်းဆုံးကြွက်အတွက်) အမျိုးသမီးထက်ယောက်ျားတို့တွင်အ (Sisk & Foster, 2004; Sisk & Zehr, 2005; Teicher, Andersen, & Hostetter, Jr. 1995) ။ အရေးကြီးတာက, သို့သော်, dopamine receptors အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းစေ၏အတိုင်းအတာများနှင့်အချိန်ကိုက်ကဤ cortical နှင့် subcortical ဒေသများအကြားကွဲပြား; ကပြောင်းလဲမှုများကြောင်းအချို့ထင်ကြေးလည်းမရှိ အပေါ် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပြောင်းလဲမှုများအခြေခံအဲဒီနှစ်ခုဒေသများရှိ dopamine receptors ၏သိပ်သည်းဆ။ သိသိသာသာအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် prefrontal cortex တိုး၌ဤအသစ်ပြန်ပြုပြင် dopaminergic လှုပ်ရှားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်နှင့်မတိုင်မှီသို့မဟုတ်အပြီးတွင်ထက်ဒီကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားသည်။ dopamine ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသောကြောင့်, တိုး, လျော့ချရေးနှင့်အပျိုဖော်ဝင်န်းကျင် dopamine အဲဒီ receptor အာရုံစူးစိုက်မှု၏ပြန်လည်ခွဲဝေမှု, အထူးသဖြင့် prefrontal ဧရိယာဖို့ limbic system ထဲကနေစီမံချက်များအတွက်အာရုံခံစားမှု-ရှာဘို့အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုများ၏သက်ရောက်မှုကိုရည်မှတ်အများအပြားယူဆချက်ကိုကမ်းလှမ်းပြီ။ တဦးတည်းအယူအဆဟာ striatum ဖို့ prefrontal cortex ဆွေမျိုးအတွက် dopamine receptors ၏ယာယီမညီမမျှအလုပ်လုပ်တဲ့ dopamine လိုငွေပြမှုအချို့အမျိုးအစားများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားမြင်ကြကြောင်းနှင့်မတူဘဲမဟုတ်ကြောင်းငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအပြုအမူများထုတ်လုပ်a"ကိုဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ," ဖန်တီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီ syndrome ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ ( "တက်ကြွစွာဆုလာဘ်ချို့တဲ့ခြင်း၏အမူအကျင့်ပြန်လည်ကုစားအမျိုးအစားအဖြစ် addicting မူးယစ်ဆေးဝါးများဒါပေမယ့်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသစ်အဆန်းများနှင့်အာရုံခံစားမှုသာထွက်ရှာ 'မှ postulated ပြီGardner, 1999အတွက်ကိုးကား လှံ, 2002, p ။ 82) ။ အလားတူဖြစ်စဉ်ကိုအပျိုဖော်ဝင်စမှာရာအရပ်ကိုကြာလျှင်, ငါတို့သည်ဆုလာဘ် salience (ရသောဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်မှစေ့စေ့နားထောင်နှင့်ဆုလာဘ်အတွက်မူကွဲမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြဖို့ဒီဂရီ) နှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံ (သောသူတို့သည်ဆုလာဘ်ကိုလိုက်ရန်အတိုင်းအတာ) တွင်တိုးမြှင့်ကိုမြင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ လှံရေးသားခဲ့သည်အဖြစ်:
[တစ်] dolescents ယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်မက်လုံးပေးတန်ဖိုးအလယ်အလတ်နှင့်အတူလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်ဒီထက်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုမှီစေခြင်းငှါ, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ / အသစ်အဆန်းရှာနှင့်ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေအဖြစ် deviant အပြုအမူတွေမြားတှငျပါဝငျခွငျးမှတဆငျ့တိုးတဆင့်အသစ်အစာစားချင်စိတ်ကိုစစ်ကူကိုလိုက်လိမ့်မည်။ အဆိုပါအကြံပြုချက် [dopamine] ဆုလာဘ် circuitry အတွက် hypofunctioning ... အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင်ဆက်နွယ်ခံရဖို့တွေးဆပုံမှန်အားယာယီနှင့်အငယျဆုံးသောပြင်းထန်မှု၏ဆိုသော်ငြားမြီးကောင်ပေါက်ဖို့, အလားတူသော Mini-'reward ချို့တဲ့ရောဂါ '' ဖော်ပြရန်ကြောင်း, အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာမြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်ကောင်းအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေသို့မဟုတ်အသစ်အဆန်းရှာအပြုအမူတွေအသစ်လူမှုရေး interaction ကများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများလိုက်စားမှတဆင့်နောက်ထပ်အစာစားချင်စိတ်စစ်ကူရှာသူတို့ကိုဦးဆောင်အခြားအသက်အရွယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီမှလှုံ့ဆော်မှုဆွေမျိုးအမျိုးမျိုးကနေလျော့နည်းစာစားချင်စိတ်ကိုတနျဖိုးမရရှိစအချို့ကိုဆိုင်းဘုတ်များပြသရန်ပေါ်လာပါသည်။ ထိုသို့သောဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန် features တွေအတွက် Natal ယူနစ်ကနေလူစုခွဲရန်နှင့်အောင်မြင်မှုနှင့်အတူမှီခိုထံမှလွတ်လပ်ရေးပေးရန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကူးအပြောင်းညှိနှိုင်းရန်မြီးကောင်ပေါက်ကူညီ evolutionarily သပ္ပါယ်ခဲ့ကြပေမည်။ လူ့ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဤလိုလားသောဆက်ဆံရေးကိုအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်, သို့သော်, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုစေခြင်းငှါအဖြစ်ကအခြားပြဿနာအပြုအမူတွေအမျိုးမျိုး (2000, စစ။ 446-447) ။
မြီးကောင်ပေါက်မယ့် "ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ," အလိုလိုနှစ်သက်ဖွယ်ပေမယ့်ကနေဆငျးရဲခံရသောအယူအဆ, (တုန့်ပြန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုချရန်, subcortical ဒေသများတွင်မြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုညွှန်ပြကြောင်းအတော်ကြာလေ့လာမှုများ, အထူးသဖြင့် accumbens အားဖြင့်ထိပါးနေသည်Ernst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006) ။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအကောင့်အာရုံ-ရှာကြံမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌အသီးအနှံကိုမရ functional dopamine လိုငွေပြမှုဖို့ပေမယ့်အတွင်းစည်းမျဉ်းအနုတ်လက္ခဏာ-တုံ့ပြန်ချက် function ကိုအစေခံသော prefrontal cortex အတွက် dopamine autoreceptors ၏ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ဆက်နွယ် "ကြားခံစွမ်းရည်" ၏ယာယီဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ (Dumont et al ။ , 2004အတွက်ကိုးကား စာနယ်ဇင်းအတွက် Ernst & လှံ) ။ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကျဆင်းခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကာလအတွင်းရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက prephontal ဒေသများရှိ dopamine ပျံ့နှံ့မှုသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ (သို့) လူကြီးများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ထက်ပိုမိုများပြားစေသည်။ ထို့ကြောင့်ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ခံစားမှုရှာဖွေခြင်းတိုးလာခြင်းကတစ် ဦး ချင်းအားဆုလာဘ်များပိုမိုမြင့်မား။ ပိုမိုမြင့်မားသောဆုများကိုရရှိရန်တွန်းအားပေးသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ကျဆင်းခြင်း၏ရလဒ်မဟုတ်ပါ။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်အထူးသဖြင့်“ ဆုချို့တဲ့သောရောဂါလက္ခဏာ” မှခံစားကြရဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော် dopaminergic system ၏ sensitivity and ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သီအိုရီအရအလားအလာကောင်းသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့်အပြင်ဆုလာဘ်ကိုပိုမိုမြင့်မားစေလိမ့်မည်။ ဤအကောင့် dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆတစ်ခုလျှော့ချရေးရှိနေသော်လည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (Rosenberg က & Lewis က, 1995) စဉ်အတွင်း prefrontal cortex အတွက်တိုးမြှင့် dopaminergic innervation ၏လေ့လာရေးနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Steroid တစ်မျိုး-လွတ်လပ်သောနှင့် Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုလုပ်ငန်းစဉ်
ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘာသာရပ်အပေါ်အစောပိုင်းကအရေးအသားဖန်ဆင်းထားတဲ့ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု (ဥပမာကဦးနှောက်အပေါ် pubertal ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုမှဆုလာဘ် salience နှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံ၌ဤ dopaminergic-mediated ပြောင်းလဲမှု attribute မှဘုံကြောင်းကိုအစောပိုင်းကမှတ်ချက်ပြု Steinberg, 2004) ။ ဒီပြုပြင်အပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ပေမဲ့, သို့သော်, အဲဒါကိုတိုက်ရိုက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ gonads prepubertally ဖယ်ရှားခဲ့ကြပါပြီ (နှင့်အရှင် pubertal ရငျ့နှင့်ဆက်စပ်လိင်ဟော်မုန်းအတွက်တိုးတွေ့ကြုံခံစားကြဘူး) ထိုတိရစ္ဆာန်များ (gonadectomized ကြပြီမဟုတ်သူကိုတိရိစ္ဆာန်များအဖြစ် dopamine အဲဒီ receptor ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်တံစဉ်များကို၏တူညီသောပုံစံများကိုပြသAndersen, Thompson က, Krenzel, & Teicher, 2002) ။ ထိုသို့အပျိုဖော်ဝင် (မျိုးဆက်ပွားရငျ့မှဦးဆောင်သောဖြစ်စဉ်ကို) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နဲ့အတူတူပါပဲမဟုတ်သည့် (ထိုကာလ၏, အမူအကျင့်သိမြင်မှုနှင့် socioemotional အပြောင်းအလဲများကို), ဖြစ်စေသဘောတရားသို့မဟုတ် neurobiologically အကြားခွဲခြားရန်အရေးကြီးပါသည်။ Sisk နှင့် Foster အဖြစ် "gonadal ရငျ့နှင့်အမူအကျင့်ရငျ့သီးခြားအချိန်ကိုက်နှင့် neurobiological ယန္တရားများနှင့်အတူနှစ်ခုကွဲပြားဦးနှောက်-မောင်းနှင်ဖြစ်စဉ်များရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရငျးနှီးအာရုံကြောစနစ်နှင့် gonadal Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းအကြားကြားမှာအပြန်အလှန်မှတဆင့် coupled နေကြသည်" (, ရှင်းပြSisk & Foster, 2004, p ။ 1040) ။ ထို့ကြောင့်ကောင်းစွာအားကြီးသောဇီဝအခြေခံရှိကြောင်းစောစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ရှာကြံဆုလာဘ် salience နှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခု maturationally-မောင်းနှင်တိုးစေခြင်းငှါ, ထိုအပျိုဖော်ဝင်နှင့်အတူ cotemporaneous လည်းမရှိ, ဒါပေမယ့်သာအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် gonadal ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
တကယ်တော့၏အချက်မှာတော့များစွာသောအမူအကျင့်အပျိုဖော်ဝင်စမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများကို (နှင့်ကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံမှားယွင်းစွာအပျိုဖော်ဝင်မှစွပ်စွဲကြသည်) အဘယ်သူ၏အချိန်ကိုက်သူတို့နှင့်အတူတော့သည်, ဒါပေမယ့် pubertal လိင်ဟော်မုန်းအတွက်အပြောင်းအလဲ၏လွတ်လပ်သောစေသည်နေတဲ့ဇီဝနာရီအားဖြင့် Pre-ပရိုဂရမ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်အပျိုဖော်ဝင်စမှာဆယ်ကျော်သက် neurobiological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အချို့သောပြောင်းလဲမှုများကို Steroid တစ်မျိုး-လွတ်လပ်သောဖြစ်ကြောင်း, အခြားသူများ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အခြားသူများကိုနှစ်ခုအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်၏ထုတ်ကုန်များမှာ (Steroid တစ်မျိုးလွတ်လပ်သောဖြစ်စဉ်များ Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုသူမြားမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်ထိခိုက်စေရှိရာ) (Sisk & Foster, 2004) ။ ထိုမှတပါး, Steroid တစ်မျိုး-မှီခိုပြောင်းလဲမှုများအမျိုးအစားအတွင်းအပျိုဖော်ဝင် (စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်အထိမိမိတို့ကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာပြကြဘူးကြောင်းအပြုအမူအတွက်ရွေ့လျားမှုအပြောင်းအလဲများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအကျူးများနှင့် perinatal ကာလအတွင်းမှာဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှု၏ရလဒ်ကိုဖြစ်ကြောင်းသူများဖြစ်ကြ၏ လိင်ဟော်မုန်း); အပျိုဖော်ဝင်စမှာဟော်မုန်းလွှမ်းမိုးမှု၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများကို (ဦးနှောက်အဖွဲ့အစည်းအပေါ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့်အမူအကျင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်နှစ်ဦးစလုံး, Active သက်ရောက်မှုအဖြစ်ရည်ညွှန်းထားတဲ့၏အဆုံးစွန်သော); နှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများလွှမ်းမိုးမှုအကြားအပြန်အလှန်၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲများကို။ ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်များ၏ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဆက်စပ်ပေးသောဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တောင်မှအပြောင်းအလဲ, စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့် Steroid တစ်မျိုး-လွတ်လပ်သောဖြစ်စဉ်များပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအချက်မှာအပျိုဖော်ဝင်စမှာလည်ပတ် dopaminergic အတွက်ပြောင်းလဲရန်ထားတဲ့အတိုင်းအတာကြောင့်အပေါ်ကိုတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်များကိုချဲ့ထွင်ရသောလိင် steroids (အစောပိုင်းဘဝ၌ဖြစ်စေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်စေ, ထိတွေ့မှု၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုမှ (1) Steroid တစ်မျိုး-လွတ်လပ်သော, (2) များမှာ အစောပိုင်းစည်းရုံးရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု), (3) ကြောင့် Activity အပျိုဖော်ဝင်စမှာလိင် steroids ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖွယ်ရှိ, (4) ကြောင့်ထိုအအချက်များအချို့ရောနှောဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ (ဒါဟာ dopaminergic စနစ်၏အခြေခံအဆောက်အဦးအသစ်ပြန်ပြုပြင်တဲ့အပျိုဖော်ဝင်စမှာ gonadal steroids လွှမ်းမိုးမှုမဟုတ်ကြောင်း, ဥပမာ, အမှုဖြစ်နိုင်သည်သို့သော်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကြောင်းကိုကင်မရွန်, 2004; Sisk & Zehr, 2005).
pubertal ဟော်မုန်းများ၏စည်းရုံးရေးသက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုအသက်အရွယ်နှင့်အတူလျော့ကျကြောင်း hypothesize ဖို့အကြောင်းပြချက်လည်းရှိပါတယ် (ကြည့်ရှု Schulz & Sisk, 2006), ဆုလာဘ်-ရှာအပေါ် pubertal ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုအပေါ်-အချိန်သို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းတွင်ရင့်ကျက်ထက်အစောပိုင်းရင့်ကျက်သူတို့တွင်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုခြင်း။ အဆိုပါ dopaminergic စနစ်အပြောင်းအလဲကိုနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏အပြည့်အဝရငျ့အကြားကြာကြာယာယီကွာဟမှုရှိသောကွောငျ့အစောပိုင်းရင့်ကျက်လည်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေဘို့ကြီးထွားအန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမအဓိကကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ကတည်းကထိုအဇီဝဗေဒကွဲပြားမှုပေးထား, ထိုကြောင့်ငါတို့သည်နောက်တဖန်သူတို့၏တူညီသော-အသက်ရွယ်တူ (ဆယ်ကျော်သက်ရူးတစ်ဦးသက်သက်သာသိမြင်အကောင့်ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံတို့တွင်ထက်အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေမြင့်မားမှုနှုန်းကိုကြည့်ပါရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ် အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်ကြား) အဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပျိုဖော်ဝင်များ၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းဆီသို့လောကလမ်းကြောင်းသစ်၏အန္တရာယ်များအပြုအမူနှင့်အတူကနဦးလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များအသက်အရွယ်အတွင်းရှိသမိုင်းဝင်အချိန်ကျော်တစ်စက်။ (စက်မှုနိုင်ငံများတွင်မီးယပ်စချိန်၏ပျမ်းမျှအသက်ဟာ3၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကိုစဉ်အတွင်းဆယ်စုနှစ်နှုန်း4လ 20 အကြောင်းကိုအားဖြင့်ငြင်းဆန်th [တွေ့မြင်စုစုပေါင်းခန့်1960½လအတွင်းအသုံးပြုပုံအဆိုပါ 1990s နှင့် 2s အကြား drop ဖို့ရာစုနှင့်ဆက်လက် Steinberg, 2008]) ။ ဤအဟောကိန်းများ၏နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်: အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများပိုမိုမြင့်မားအရက်၏နှုန်းထားများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း, သက်ငယ်ပြစ်မှုနှင့်ပြဿနာအပြုအမူသတင်းပို့, ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးမြင်ကြတဲ့ပုံစံ (Collins & Steinberg, 2006; Deardorff, Gonzales, ခရစ္စတိုဖာ, Roosa, & Millsap, 2005; Steinberg, 2008) နှင့်အရက်, ဆေးလိပ်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်၏အသက် (အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အသက်အရွယ်) ရှင်းရှင်းလင်းလင်း (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှငြင်းဆန်ထားပါတယ်ဂျွန်ဆင် & Gerstein, 1998), pubertal စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အတွင်းရှိသမိုင်းဝင်ကျဆင်းမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း။
အပျိုဖော်ဝင်စမှာပေါ်ပေါက်သော dopaminergic စနစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကြောင့် pubertal ဟော်မုန်းများ၏လှုပ်ရှားမှုများလွှမ်းမိုးမှုမှတိုက်ရိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, သို့ရာတွင်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများအကြား, ထိုကဲ့သို့သောအာရုံ-ရှာကဲ့သို့အချို့အပြုအမူတွေ၏ပေါ်ပေါက်ရေး, အပျိုဖော်ဝင်န်းကျင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကောင်းသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သဘာဝကျပါတယ် (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောမှတ်ချက်ချအဖြစ်ဘယ်သူကိုတို့တွင် dopaminergic အသစ်ပြန်ပြုပြင်ပိုပြီးသိသာဖြစ်ပါသည်) (ကိုလညျးရှု လှံ, 2000) ။ Sensation-ရှာ, က uncharted ရေထဲသို့လုပ်ငန်းများကပါဝင်ပတ်သက်နေသောကြောင့်, ကနှင့်အတူအန္တရာယ်တစ်ခုအချို့ဒီဂရီသယ်ဆောင်, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေမျိုးပွားရှင်သန်နှင့်လွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ Belsky နဲ့ကျွန်မတခြားနေရာရေးထားပြီသကဲ့သို့ "ဤကဲ့သို့သောစွန့်စားမှုခံရဖို့ငြင်းဆန်သည့်အခါကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးအကျိုးရှိထင်ရှားပြကြပြီမယ်အန္တရာယ်များကိုယူရန်စိတ်အားထက်သန်တောင်မှအသက်အန္တရာယ်အန္တရာယ်များ, တကယ်တော့ရှင်သန်မှုသို့မဟုတ်မျိုးပွားဖို့ ပို. ပင်အန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် chancy တစ်ဦးကိုမီးရှို့လယျပိုငျးအထိခြဲ့ထှမှတဆင့်အပြေးတစ်ခုသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းစီးဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့, ဒါလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ( " ပို. ပင်အန္တရာယ်များပါပြီမယ်ပြီစေခြင်းငှါ,Steinberg & Belsky, 1996, p ။ 96) ။ ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်ရှင်သန်နှင့်မျိုးပွားမညျ့သူသားစဉ်မြေးဆက်ကျန်ရစ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်ရောက်လာသောအခါထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်များကိုယူနာမယူဘဲတစ်ဦးချင်းစီ differential ရရှိကြရပါသောအတိုင်းအတာအထိ, သဘာဝရွေးချယ်ခြင်းကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမှာအနည်းဆုံးအချို့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူဆီသို့စိတျ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မျက်နှာသာမယ် လာသောအခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးပွားစတင်ခဲ့သည်။
မူလကပင်အန္တရာယ်များအခြေအနေများတွင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးမြှင့်တင်ရန်အပြင်, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေကိုလည်းကြီးစိုးပြသမှုအားဖွငျ့နှင့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေး" (ဟုခေါ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားတို့အပေါ်မှာ, အားသာချက်များကိုအပ်နှင်းစေခြင်းငှါ,စိန်, 1992) ။ အဆိုပါကြီးစိုး display ကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအန္တရာယ်များကိုယူဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ခြင်းကောင်းစွာရရှိနှင့်လူမှုရေးအပေါ်မှအောက်သို့ဆင်းအတွက်ကြီးစိုးထိန်းသိမ်းခြင်းများအတွက်နည်းဗျူဟာပါပြီပေလိမ့်မည်။ သူတို့မိမိကိုယ်ကိုအဘို့အရယူနှင့်တဦးတည်းရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကို (ဥပမာ, အစားအစာ, အမိုးအကာ, အဝတ်အစား) ၏အချိုးအစားမညီမျှမှုရှယ်ယာပေါက်ဘော်မှလှူဒါန်းခဲ့သောကွောငျ့, ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းအခြားအကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့်မျိုးဆက်ပွားအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်နေသောကြောင့် status ကိုဆည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများသာရွေးချယ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ် မိတ်လိုက်ရာမှယောက်ျား။ အန္တရာယ်-takers အစှမျးသတ်တိနှငျ့အသှငျအပွငျ၌ သာ. အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏နိုင်အောင်ကြီးစိုး display တွေအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်မျိုးပွားအကြား link ကိုဖျန်ဖြေသောအတိုင်းအတာအထိက pubertal ရငျ့အရပျကိုယူထားပါတယ်သည်အထိအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်တိုးနှောင့်နှေးစေရန်ကောင်းသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သဘာဝကျပါတယ် ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေးမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, အထီးများကအာရုံခံစားမှု-ရှာ၏ display တွေအလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်အဖြစ်သူတို့ရဲ့လိုလားအကြောင်းကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုစလှေတျကြပေမည်။ ဒါဟာ (ယောက်ျားအမျိုးသမီးကိုဆွဲဆောင်သောသူတို့အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကျန်ရစ်သူနှင့်မျိုးပွားနှုန်းမြင့်မားအလားအလာနှင့်အတူသားစဉ်မြေးဆက်ထမ်းအများဆုံးဖွယ်ရှိအထီးရွေးချယ်ဖို့အမျိုးသမီးများအတွက်ဇီဝသဘာဝကျပါတယ်Steinberg & Belsky, 1996) ။ လူ့အပြုအမူပြောင်းလဲပေးသောအောက်ရှိအခြေအနေများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့မနုဿဗေဒပညာရှင်များကလေ့လာခဲ့ကြသည်ဘော်ရီဂျင်နီလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် (ဥပမာ, ဗင်နီဇွဲလားအတွက်နာ; ဘရာဇီးအတွက် Yamamano;! အာဖရိကအတွက် Kung-), "လူပျိုတို့အဆက်မပြတ်အဖြစ်အကဲဖြတ်လျက်ရှိသည် အလားအလာ လင်နှင့်ချစ်သူများအဖြစ်သူတို့ကို select လုပ်စေခြင်းငှါ, သောသူတို့သည် ... "(Wilson & Daly, 1993, p ။ 99, မူရင်းအတွက်အလေးပေး) ။ ထို့ပြင် "မုဆိုးစွမ်းရည်, စစ်ဆင်ရေး, နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုကွောငျးထငျရှားသောလုလင်တို့သည်ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏အဓိကပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်" (Wilson & Daly, 1993, p ။ 98) ။ ဒီဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အငြင်းအခုံ၏သံသယစာဖတ်သူများဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများလိင်ဆွဲဆောင် "မကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးများ" ကိုရှာဖွေဆိုတဲ့အချက်ကိုမှစာပေနှင့်ရုပ်ရှင် allusions ၏စည်းစိမ်၏သတိပေးနေကြသည်။ တောင်မှခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း, (ရှိဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးငယ်များကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင့်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်နှင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ရန်လိုယောက်ျားလေးကိုရှာဖွေPellegrini & Long, 2003).
အမျိုးသမီးအပြုအမူထက်အထီး၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လျှောက်ထားသည့်အခါအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်သပ္ပါယ်သောအယူအဆပိုပြီးအလိုလိုသိသဘာဝကျပါတယ်ပေမယ့်နှင့်အထီးမြီးကောင်ပေါက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအန္တရာယ်-ယူပြီးပိုပြီးမကြာခဏအမျိုးသမီးထက် (အချို့ပုံစံများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်Harris က, Jenkins, & Glaser, 2006), အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုအစဉ်အမြဲစွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေ၏ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်ကြသည်မဟုတ် (ဥပမာ, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007) ။ ထိုမှတပါး, အရွယ်ရောက်နှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏အဆင့်မြင့် (အမျိုးသမီး၏လေ့လာမှုများအဖြစ်အထီးအစီရင်ခံခဲ့ကြGardner & Steinberg, 2005) ။ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစွန့်စားမှုများတွင်ကျား၊ မကွာဟမှုသည်ကျဉ်းမြောင်းနေပုံရသည် (Byrnes, Miller, & Schafer, 1999) နှင့်စွန့်စားစားစားသုံးမှုဆိုင်ရာစံနမူနာများကိုအသုံးပြုထားသောပုံရိပ်လေ့လာမှုများသည်ကျား၊သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007) အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုဇီဝဗေဒအားဖြင့်ထက်အခြေအနေတွင်အားဖြင့်ပိုပြီးကမကထပြုခဲ့ခြင်းအလိုငှါအကြံပြုထားသည်။
Sensation အတွက်အပြောင်းအလဲများရှာ, အန္တရာယ်- ယူ. , အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက်ထိခိုက်လွယ်မှု၌ဆပ်
ငါ၏အလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်ကျွန်မဖွယ်ရှိအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုစွမ်းရည်အတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်ကောက်ယူကြပါပြီလတ်တလောလေ့လာမှုကနေအများအပြားတွေ့ရှိချက်အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အရေးကြီးသောတစ်ဦးချင်းစီ '' စိတျပြောင်းလဲမှုများဆီသို့နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီများမှာ (ကြည့်ရှု Steinberg, Cauffman, Woolard, ဂရေဟမ်, & Banich, 2007 လေ့လာမှု၏ဖော်ပြချက်သည်။ ကျွန်ုပ်သိသည်အတိုင်း, ဒီဖြစ်ရပ်များ၏တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည် (အသက် 10 မှ 30 နှစ်အထိ) မှကျယ်ပြန့်အလုံအလောက်ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် preadolescence, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်တစ်လျှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုဆနျးစစျဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမား (N = 935) ၏နမူနာနှင့်အတူ အစောပိုင်းလူကြီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီတွင် Benthin Risk Perception Measure (Benthin, Slovic, & Severson, 1993)၊ Barratt Impulsive Scale အပါအ ၀ င်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးများသည့် Self- report အစီအမံများပါ ၀ င်သည်။Patton, Stanford, & Barratt, 1995), နှင့် Zuckerman Sensation-ရှာအံ့သောငှါစကေး (Zuckerman et al ။ , 1978)1အနာဂတ်အရှေ့တိုင်းဆန်တစ်အတိုင်းအတာအပါအဝင်ဒီစီမံကိနျးအတှကျဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်အများအပြားသစ်တွေ, (Steinberg et al ။ , 2007) နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Peer မှခုခံတဲ့အတိုင်းအတာ (စာနယ်ဇင်းအတွက် Steinberg & Monahan) ။ ဘက်ထရီလည်းဆုလာဘ် sensitivity ကိုတိုင်းတာသောအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကို, (အပါအဝင်မြောက်မြားစွာကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်ခွင့်စွမ်းဆောင်ရည်တာဝန်များကို, ပါဝင်သည်Bechara, Damasio, Damasio, & Anderson, 1994); နှိုင်းယှဉ်ချက်ချင်းနှောင့်နှေးဆုလာဘ်များအတွက်ဆွေမျိုး preference ကိုတိုင်းတာသောနှောင့်နှေးဝတာဝန်, (အစိမ်း, Myerson, Ostaszewski, 1999); နှင့်ရှေ့ဆက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိုတိုင်းတာပေးသောလန်ဒန်၏မျှော်စင်, (Berg & Byrd, 2002).
ကျနော်တို့အသက်အရွယ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အကျိုးကျေးဇူးများထိုကဲ့သို့အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံသို့မဟုတ်သောက်သုံးခဲ့သူတစ်ဦးမောင်းနှင်တဲ့ကားထဲတွင်စီးနင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်လှုပ်ရှားမှုများ၏ကုန်ကျစရိတ်များပေးရကြောင်းအစီရင်ခံဖို့အတိုင်းအတာအကြားတစ်ဦး curvilinear စပ်လျဉ်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့်အသက်အရွယ်နှင့် Self-သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်အကြား ရှာကြံအာရုံခံစားမှု (Steinberg, 2006) ။ အဆိုပါအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗားရှင်းငွေကြေးဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုထုတ်လုပ်ကြောင်းကုန်းပတ်သူတို့ရဲ့ရှောင်ရှားခြင်းနှိုင်းယှဉ်ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ထုတ်လုပ်ကြောင်းကုန်းပတ်၏ဖြေဆိုသူ '' ရွေးချယ်ရေး၏လွတ်လပ်သောအစီအမံကိုဖန်တီးရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုသောကြောင့်, ငါတို့ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ် sensitivity ကိုအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုမှာသီးခြားစီကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကျနော်တို့အသက်အရွယ်အကြားတစ်ဦး curvilinear စပ်လျဉ်းတွေ့ sensitivity ကိုဆုချ, linearly တိုးမြှင့်ပေးသောအန္တရာယ် preference ကိုနှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာဘို့, ဒါပေမယ့်မရအသက်အရွယ်နှင့်ပြစ်ဒဏ် sensitivity ကိုအကြားမြင်ပြီပုံစံ, (ဆင်တူCauffman, Claus, Shulman, Banich, ဂရေဟမ်, Woolard, & Steinberg, 2007) ။ ပိုများသောအထူးသ, အာရုံခံစားမှု-ရှာအပေါ်ရမှတ်များ, အန္တရာယ် preference ကိုနှင့် sensitivity ကိုဆုချအားလုံးနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကို (အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်. 10 နှင့် 13 အကြားတစ်နေရာရာ peaking) သည်အထိအသက်အရွယ် 16 ကနေတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အဲဒီနောက်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ နှောင့်နှေးဝတာဝန်အတွက်ရေတိုရေရှည်ဆုလာဘ်များအတွက် preference (12 နှစ်အရွယ်ဖို့ 13- တို့တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးခဲ့Steinberg, ဂရေဟမ်, O'Brien, Woolard, Cauffman, & Banich, 2007), အပျိုဖော်ဝင်န်းကျင်မြင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုလူတို့နှင့်လည်းကိုက်ညီ။ ဆနျ့ကငျြ, လန်ဒန်တာဝန်များ၏မျှော်စင်ပေါ်တွင်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအပေါ်ကောင်းစွာပြစ်ဒဏ် sensitivity ကိုကဲ့သို့သောအနာဂတ်တိမ်းညွတ်, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ခုခံကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ၏အစီအမံအပေါ်ရမှတ်များ, ဒီတူညီတဲ့ကျော်တစ်ဦး linear တိုးပြသခဲ့သည် အဆိုပါ curvilinear အာရုံ-ရှာရန်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိပုံစံ, အန္တရာယ် preference ကိုနှင့် sensitivity ကိုဆုချရိုးရှင်းစွာပိုပြီးယေဘုယျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့တဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမပေးကြောင်းအကြံပြုအသက်အရွယ်ကာလ။ ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အဖြစ်, အသက်ကွဲပြားခြားနားမှုဤနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများငါသည်ဤဆောင်းပါး၌ဘွား set အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု၏ neurobiological မော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါအာရုံ-ရှာထဲမှာတိုး, အန္တရာယ် preference ကိုနှင့် preadolescence နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိအလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြား sensitivity ကိုဆုချဥပမာ (အပျိုဖော်ဝင်၏အချိန်ဝန်းကျင်ဆုလာဘ် salience အတွက်အထူးသဖြင့်သိသိသာသာတိုးဖေါ်ပြခြင်းကြွက်များ၏အမူအကျင့်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်, လှံ, 2000) ။ ကလေးများကြားတွင်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များများ၏မျှော်လင့်အတူဒါပေမဲ့မြီးကောင်ပေါက်အကြားကိုပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိအန္တရာယ်များအပြုအမူနှင့်အတူအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏အကျိုးဆက်များများ၏မျှော်လင့်နေတဲ့အပြောင်းအလဲ၏သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုတိုးလာသဖြင့်လိုက်ပါသွားသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းကုန်ပြီလည်းရှိပါသည် အန္တရာယ်-ယူပြီးတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်လှုပ်ရှားမှု၌ (သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2007).
အပျိုဖော်ဝင်စအချိန်မှာဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော oxytocin အတွက်အပြောင်းအလဲများ
အဆိုပါ dopaminergic စနစ်၏ပြုပြင်ဖွယ်ရှိအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နေရာယူကြောင်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်တိုး undergird ကြောင်း Synaptic အဖှဲ့အစညျးမှာအတော်ကြာအရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ Synaptic အဖှဲ့အစညျးမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုပိုမိုတိုက်ရိုက်အပျိုဖော်ဝင်စမှာ gonadal ဟော်မုန်းအတွက်မြင့်တက်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ယေဘုယျအားလေ့လာမှုများ (gonadal steroids လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်လူမှုရေးဘွန်းအပေါ်မှတ်ဉာဏ်အပေါ်အားကြီးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကွောငျးတှေ့နယ်လ်ဆင်, Leibenluft, McClure, & ထင်းရူး, 2005), နှင့်ဤလွှမ်းမိုးမှုကမကထပြုခဲ့ကြသည်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ, amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော limbic အဆောက်အဦများအတွက် oxytocin များအတွက် receptors တွေရဲ့ပြန့်ပွားအပေါ် gonadal steroids ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (လည်း neurotransmitter အဖြစ်လုပ်ဆောင်မယ့်ဟော်မုန်း) မှတဆင့်။ အပျိုဖော်ဝင်စမှာ oxytocin receptors ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်အများဆုံးအလုပ်အီစရိုဂျင်၏အခန်းကဏ္ဍကို (ဥပမာကိုလေ့လာခဲ့ပေမဲ့ Miller က et al ။ , 1989; Tribollet၊ Charpak, Schmidt, Dubois-Dauphin, & Dreifuss, 1989), testosterone ဟော်မုန်းအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏သက်သေအထောက်အထားများ (စလည်းမရှိChibbar et al ။ , 1990; Insel et al ။ , 1993) ။ ထိုမှတပါး, dopamine အဲဒီ receptor ပြုပြင်အပေါ်အပျိုဖော်ဝင်စမှာ gonadal steroids ၏အနည်းငယ်သက်ရောက်မှုညွှန်ပြပေးသော gonadectomized ကြွက်, (၏လေ့လာမှုများမှမတူဘဲAndersen က et al ။ , 2002), steroids ၏ Post-gonadectomy အုပ်ချုပ်ရေးမှတစ်ဆင့်အပျိုဖော်ဝင်စမှာ gonadal steroids manipulate ကြောင်းစမ်းသပ်လေ့လာမှုများ (oxytocin-mediated neurotransmission အပေါ်အီစရိုဂျင်နှင့် testosterone ဟော်မုန်း၏တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုညွှန်ပြChibbar et al ။ , 1990; Insel et al ။ , 1993).
oxytocin ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံး (ကအထူးသဖြင့်မိခင်အပြုအမူမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, လူမှုရေးစဘွန်းအတွက်ကစားပေမယ့်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းညှိလည်းအရေးကြီးပါသည်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်လူသိများသည်Insel & Fernald, 2004; Winslow & Insel, 2004) ။ နယ်လ်ဆင် et al အဖြစ်။ မှတ်စု, "gonadal ဟော်မုန်းဘယ်လို [လူမှုစိတ်ခံစားမှုသည့်စနစ်] အတွင်းအဆောက်အဦများအပေါ်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုလူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ရှိသည်, နောက်ဆုံးမှာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူမှုရေးစီးပွားရေးနှိုးဆွခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်" (2005, p ။ 167) ။ ဤရွေ့ကားဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြကူညီမြီးကောင်ပေါက် paralimbic, limbic ၏အထူးသဖြင့်ကြီးထွား activation ပြခြင်းနှင့်ကွဲပြားစိတ်ခံစားမှုအသုံးအနှုန်းတွေနှင့်လူမှုရေးတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူမျက်နှာများအပါအဝင်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှု, တုန့်ပြန် prefrontal ဒေသများ medial ။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဤမျှလောက်, အခြားသူများ '' ထင်မြင်ယူဆ၏ကြီးထွားအသိပညာပေးတဲ့အချိန်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်မကြာခဏဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကြောင်းကစိတ်ကူးပုံဖော်ကြောင်း Self-ဝိညာဏ်၏ထိုကဲ့သို့သောခိုင်မာတဲ့အသိရှိခြင်းကပါဝင်ပတ်သက်ရသော "စိတ်ကူးယဉ်ပရိသတ်ကို" အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်အောင်သူတို့ကအစရှင်းပြ အပြုအမူလူတိုင်းအခြားသူရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏အာရုံဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Self-ဝိညာဏ်တိုး၏ခံစားချက်များကို, အသက် 15 န်းကျင်အထွတ်အထိပ်နှင့်ကျဆင်း (အဆင့်, Lane, မျောက်လွှဲကျော်, & Gerrard, 2004) ။ Self-ဝိညာဏ်၌ဤတက်နှင့်အကျ (မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြောင်းလဲမှုများမှနှစ်ဦးစလုံးစွပ်စွဲထားပြီးElkind, 1967) နှင့်လူမှုရေးယုံကြည်မှုအတွက်အတက်အကျမှ (အဆင့်, Lane, မျောက်လွှဲကျော်, & Gerrard, 2004ဤအတကယ်တော့အတွက်ဖြစ်ရပ်ဆန်းမှမျှဝေသူဖြစ်နိုင်ပေမယ့်), နှင့်, pubertal ဟော်မုန်းအတွက်တိုး၏ရလဒ်အဖြစ်လူမှုစိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်၏ arousal ဖြစ်ကောင်းအဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
အဆိုပါ oxytocin receptors ၏ပြန့်ပွားခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တိုးမြှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအကြားအဆိုပြုထား link ကိုအလိုလိုသိသာမျှမက, အမှန်ပင်, မိခင် Bond အတွက် oxytocin ၏အရေးပါမှုအားတဦးတည်း (အလွန်အမင်းမှီခိုအမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်အတွင်းမိခင်အန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အတှကျဆိုလိုသည်မှာပြုလုပ်မဲ့ဖြစ်စေသည်ပါလိမ့်မယ်) ကိုယ့်ပြောင်းပြန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေလိမ့်မည်။ အကြှနျုပျ၏အငြင်းအခုံ oxytocin အတွက်တိုးသို့သော်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကသက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေး၏ salience တစ်ခုတိုးစေပါတယ်နှင့်ရွယ်တူ၏ salience ၌ဤတိုးအန္တရာယ်များအပြုအမူအားပေးမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းကိုကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
အပျိုဖော်ဝင်၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ရလဒ်များကြောင့်လူမှုရေးလှုံ့ဆော်မှုဖို့ကြီးထွားသတိဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အထူးအရေးပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုကအုပျစုထဲမှာပေါ်ပေါက်ဖို့ ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အရွယ်ရောက်သူထက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးရဲ့ရွယ်တူချင်းအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးကိုသုံးပါသောအဆိုပါဒီဂရီအင်အားအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်မဆယ်ကျော်သက်ကလေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏တစ်ခုတည်းသောအင်အားအကောင်းဆုံး, ခန့်မှန်း (Chassin et al ။ , 2004) ။ မော်တော်ယာဉ်မတော်တဆမှုများအပေါ်သုတေသနပြုချက်အရဆယ်ကျော်သက်ယာဉ်မောင်းတစ် ဦး မောင်းနှင်သောကားတစ်စီးတွင်အသက်အရွယ်တူသောခရီးသည်များရှိနေခြင်းသည်ကြီးလေးသောမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိသာစေသည် (Simons-Morton, Lerner, & Springer, 2005) ။ ရွယ်တူချင်းများဖြစ်သည့်အခါဆယ်ကျော်သက်များသည်လိင်တက်ကြွရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည် (DiBlasio & Benda, 1992; အရှေ့, Felice, & မော်ဂန်, 1993; Udry, 1987) နှင့်သောအခါ ယုံကြည် ၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများကိုသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအမှန်တကယ် (များမှာဖြစ်စေမ, လိင်တက်ကြွဖြစ်ကြောင်းBabalola, 2004; Brooks-Gunn & Furstenberg, 1989; DiIorio et al ။ , 2001; Prinstein, Meade, & Cohen ကို, 2003) ။ နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ဖက်ဒရယ်ဗျူရိုများကပြုစုစာရင်းဇယား (မြီးကောင်ပေါက်သူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ထက်အုပ်စုများအတွက်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်လူကြီးများထက်ဖြစ်ကြောင်းအတော်လေး compellingly ပြသZimring, 1998).
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေမကြာခဏအုပ်စုများထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုများအတွက်အများအပြားယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းလင်းချက်ရှိပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားလေ့လာတွေ့ရှိအုပ်စုသည်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏အတော်လေး သာ. ကြီးမြတ်ပျံ့နှံ့မြီးကောင်ပေါက်ရိုးရှင်းစွာလူကြီးများလုပ်ပေးထက်သက်တူရွယ်တူအုပ်စုများအတွက်အချိန်ပိုမို (ဖြုန်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေရပ်တစေခြင်းငှါဘရောင်း, 2004) ။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအမြင်ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေအတူတူပင်အာရုံကြော circuitry မြှင့်လုပ်ဆောင်, ဤ သာ. ကွီးမွတျအာရုံရှာဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် impels ကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရွယ်တူချင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍရှိမရှိဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့, (အသက်အရွယ် 14 ဆိုလို) အရာမြီးကောင်ပေါက်အတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကောက်ယူလူငယ်အချို့ (အသက် 20 ဆိုလို), နှင့်အရွယ်ရောက်သူ (အသက် 34 ဆိုလို) ကျပန်းခဲ့ကြသည် အခြေအနေနှစ်ခုထဲကတစ်ခုအောက်မှာကွန်ပျူတာအလုပ်များကိုဘက်ထရီဖြည့်စွက်ဖို့တာဝန်: တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုသူငယ်ချင်းများကို (များ၏ရှေ့မှောက်တွင်Gardner & Steinberg, 2005) ။ အဆိုပါတာဝန်များကိုတစ်ခုမှာဤလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းတဦးတည်းအနေနဲ့လမ်းဆုံချဉ်းကပ်သောအခြေအနေတက်ကြွလာသည်တစ်ဦးကဗီဒီယိုမောင်းနှင်မှုဂိမ်းတစ်ခုအသွားအလာအလင်းအဝါရောင်လှည့်မြင်သည်နှင့်ရပ်တန့်ပါသို့မဟုတ်လမ်းဆုံမှတဆင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ခဲ့သည်။ တာဝန်များတွင်တစ်ဦးရွေ့လျားကား screen ပေါ်မှာဖြစ်တယ်, တစ်ဦးအဝါရောင်အသွားအလာအလင်းပေါ်လာသောမကြာမီတစ်ချိန်ချိန်, နံရံတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်များနှင့်ကားကို crash လိမ့်မည်ဟုအချက်ပြ။ အသံကျယ်ဂီတနောက်ခံကစားနေသည်။ အဖြစ်မကြာမီအဝါရောင်အလင်းပုံပေါ်သည်အတိုင်း, သင်တန်းသားများကိုမောင်းနှင်မှုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘရိတ်လျှောက်ထားရန်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရပေမည်။ သင်တန်းသားများကို, ကြာကြာသူတို့ကကားမောင်းကြောင်းပြောသည်သူတို့ဝင်ငွေပိုရမှတ်ပေမယ့်ကားကိုထိုအုတ်ရိုးသို့ပျက်သွားတာမှန်လျှင်, စုဆောင်းခဲ့ကြသမျှသောအချက်များဆုံးရှုံးခဲ့ရဖြစ်ကြောင်းနေကြသည်။ အလငျး၏အသွင်အပြင်မြို့ရိုး၏အသွင်အပြင်အကြား elapses ထိုကာလ၏ပမာဏစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားဒါကြောင့်ကားကို crash မည်သည့်အခါမျှော်လင့်ဖို့လမ်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ကြာကြာပိုပြီးအန္တရာယ်ဆန္ဒရှိနေသောသူတို့ကိုထက်ကားကိုမောင်းဒီဂိမ်းအတွက်အန္တရာယ်များကိုယူဖို့ပိုရှိုင်းနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီ။ ဘာသာရပ်များတစ်ဦးတည်းရှိစဉ်အခါ, အန္တရာယ်များမောင်းနှင်မှုများအဆင့်ဆင့်သုံးခုအသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး, မိတ်ဆွေများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှစ်ဆ, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအကြားတူညီခဲ့တဲ့ပုံစံလူပျိုအကြားငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကတိုးလာပေမယ့်အရွယ်ရောက်သူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ (မအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျနော်တို့ကအဓိကရှာတွေ့လုပ်ခဲ့တယ် ယောက်ျားအမျိုးသမီးထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်များကိုယူပြီးနှင့်အတူလိင်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု,) ။ ရွယ်တူချင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်လည်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးအကြား, တဖနျ, လူမှုရေးဖက်ရှင်အတွက်အဟောင်းတွေဘာသာရပ်များထက်အသက်ငယ်သူတို့တွင်သိသိသာသာပိုပြီးပြုမူဖို့တစ်ဦးချင်းစီ '' ဖော်ပြထားလိုလိုလားလားတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ်ရွယ်တူများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအာရုံကြောဟာ socioemotional ကွန်ယက်၏ကြီးထွား activation ကကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးကိုအထီး 19 နှစ်အရွယ်ဘာသာရပ်များ (နဲ့အတူကောက်ယူခဲ့ကြတချို့လေယာဉ်မှူးအလုပ်ကိုမှလာSteinberg & Chein, 2006) ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များသူတို့အဝါရောင်လှည့်နှင့်လမ်းဆုံမှတဆင့်မောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းအသွားအလာအလင်းအိမ်တွေနဲ့လမ်းဆုံတစ်ခုစီးရီးကြုံတွေ့ရသောအတွက်မောင်းနှင်မှုတာဝန်တစ်ခု updated version ကို (တိုးမြှင့်လိုဖျော်ဖြေနေစဉ်ဤလုပျငနျးတှငျကျနော်တို့ fMRI ဒေတာစုဆောင်း မိမိတို့အကျိုးကိုသူတို့လုံခြုံစိတ်ချစွာမှတဆင့်ဖန်ဆင်းပေမယ့်) သူတို့ကားပျက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်သလောက်မိမိတို့အကျိုးကိုလျှော့သော်လည်းမလို (သူတို့အနေနဲ့ချဉ်းကပ်ကားတစ်စီးသို့ပျက်ကျခဲ့လျှင်လျော့ချ) သို့မဟုတ်ဘရိတ်လျှောက်ထားလျှင်။ ယင်းကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ Gardner နှင့် Steinberg (2005) လေ့လာမှုဘာသာရပ်နှစ်ခုမိတ်ဆွေများကိုအတူဓာတ်ခွဲခန်းမှ လာ. , ကျနော်တို့ (ပြင်ပကွန်ပျူတာမော်နီတာပေါ်တွင်ဘာသာရပ်ရဲ့အပြုအမူကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဘာသာရပ်ရဲ့ငွေကြေးမက်လုံးတစ်ခုရှယ်ယာလက်ခံရရှိ) ကသံလိုက်ထိန်းချုပ်မှုခန်း၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်စေသည့်ရွယ်တူရှိခြင်းအားဖြင့်ရွယ်တူအခြေအနေတွင်ကြိုးကိုင်သို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ သီးခြားအခန်း။ ဘာသာရပ်များအတွက် peer-ပစ္စုပ္ပန်ခွအေနအေအတွက်မောင်းနှင်မှုတာဝန်နှစ်ခုပြေးဖျော်ဖြေလျက်, peer-ပျက်ကွက်အခြေအနေနှစ်ခု; အဆိုပါ peer-ပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေတွင်မိမိတို့မိတ်ဆွေများကိုစောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်, နှင့်ရွယ်တူ-ပျက်ကွက်အခြေအနေ, မိမိတို့မိတ်ဆွေများကိုသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစကင်နာအတွက်ဘာသာရပ်များအနေဖြင့်စုဆောင်းအပြုအမူဒေတာတစ်ခုပျက်ကျများ၏အရေအတွက်တိုးများနှင့်များ၏အကြိမ်ရေအတွက် concomitant ကျဆင်းခြင်းများကသက်သေအတိုင်း, အစောပိုင်းကလေ့လာမှုမှာလေ့လာတွေ့ရှိဖို့ပြင်းအားအလားတူခဲ့ကြောင်းရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေတစ်ခုတိုးညွှန်ပြ အဆိုပါယာဉ်ကြောအလင်းအိမ်အဝါရောင်လှည့်လာသောအခါ braking ။
အဆိုပါ fMRI အချက်အလက်များ၏စာမေးပွဲရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်းမောင်းနှင်မှုဂိမ်း peer-ပျက်ကွက်အခြေအနေကစားသောအခါ activated မခံခဲ့ရကြောင်းအချို့ဒေသများတွင် activated ကြောင်းညွှန်ပြ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမသက်ဆိုင်သက်တူရွယ်တူအခွအေနေ၏, ထိုမောင်းနှင်မှုတာဝန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များ prefrontal နှင့် parietal အသင်းအဖွဲ့ cortical (သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ဒေသများ) အပါအဝင်ဦးနှောက်ဒေသများတစ်ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေကွန်ယက်ကိုရူးနှမ်း။ ကျနော်တို့ကိုလည်း medial တိုကျရိုကျ cortex, (အဓိကအားဖြင့် accumbens အတွက်) လက်ဝဲ ventral striatum အတွက်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမွငျလြှငျဒါပေမယ့်ရွယ်တူ-ပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေ, သာလွန်ယာယီ sulcus left နှင့် medial ယာယီအဆောက်အဦများထွက်လာခဲ့တယ်။ တနည်းအားဖြင့်ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်းလူမှုစိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်ကို activated နှင့်ပိုပြီးအန္တရာယ်များအပြုအမူမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဤသည်သင်တန်း၏, လေယာဉ်မှူးအလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အနက်အတွက်အလွန်သတိထားရရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါပေမယ့်ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆုလာဘ်မှထိတွေ့မှုအားဖြင့် activated ကြောင်းတူညီသော circuitry ရွယ်တူအမှန်တကယ်အလားအလာကြိုးလုပ်စေခြင်းငှါ, အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါတယ် activated ဆိုတဲ့အချက်ကို - နှင့်အလားအလာအန္တရာယ်များ - လှုပ်ရှားမှုများ ပို. ပင်အကျိုး။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာတော့ထို့နောက်ပိုမို merrier ဖြစ်စေခြင်းငှါမသာ - ပိုပြီးလည်း riskier ဖြစ်နိုင်သည်။
အနှစ်ချုပ်: အပျိုဖော်ဝင်စမှာလူမှု-စိတ်ခံစားမှုစနစ်၏ arousal
အကျဉ်းချုပ်၌, ထိုအရပ်၌ pubertal အကူးအပြောင်းကြောင့်ဆုလာဘ် salience ပြောင်းလဲမှုများဖွယ်ရှိကြောင်းအာရုံ-ရှာအတွင်းသိသိသာသာတိုးနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားပင်ဖြစ်သည်ငါလူမှုခေါ်ပြီဘာ dopaminergic လမ်းကြောင်းတစ်ဇီဝ-မောင်းနှင်ပြုပြင်ရာမှရရှိလာတဲ့ sensitivity ကိုဆုချ -emotional ဦးနှောက်စနစ်။ ဒါဟာအာရုံကြောအသွင်ပြောင်းကိုလည်းလူမှုစိတ်ခံစားမှုအလှည့်ထဲမှာမှဆယ်ကျော်သက် '' သတိ heightens ပေးသောစနစ်, နှင့်, လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက်များအတွက်မှတ်ဉာဏ်အတွင်း oxytocin receptors အတွက်သိသိသာသာတိုးကလိုက်ပါသွားသည်။ prepubertal တစ်ဦးချင်းစီမှဆွေမျိုးဤပြောင်းလဲ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်, အပျိုဖော်ဝင်မှတဆင့်သွားသောမြီးကောင်ပေါက်ဆုလာဘ်ရဖို့ရန်အလို့ငှာ, ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်းတစ်ခုအကွံအတွက်အန္တရာယ်များကိုယူဖို့ပိုရှိုဖြစ်ကြသည်။ ဆုလာဘ်-ရှာ၌ဤတိုးလာသည့်ဆယ်ကျော်သက်ဆယ်စုနှစ်၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းအများဆုံးသိသာသည်ကကျဆင်းဖို့အစပြုပေးသောပြီးနောက်၎င်း၏အပျိုဖော်ဝင်စတင်ခြင်းန်းကျင်စတင်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ချိန်အသက်အရွယ် 15 န်းကျင်ဖွယ်ရှိထိပ်ရှိပါတယ်။ ဤပြောင်းလဲမှုများ၏အမူအကျင့်သရုပ်, စမ်းသပ်နှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားခင်းကျင်း အသုံးပြု. လေ့လာမှုများနှင့် Self-အစီရင်ခံစာတူရိယာတစ်ခုကျယ်ပြန့်အတွင်းထင်ရှားများမှာအများအပြားနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးမြင်ကြလျှင်, ယုတ္တိနည်းဦးနှောက်ထဲမှာကောင်းမွန်စွာမှတ်တမ်းတင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည် ။
အခိုင်အမာ၏ဤအစုအပြုအမူနှင့်အတူဇီဝဗေဒလင့်ထားသောလူသားများတွင်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားမရှိခြင်း၏အမြင်တွင်, သို့သော်, စနစ်ဖြစ်ပြီးရမည်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း neurobiological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအထူးသဖြင့်အစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသာသူတို့ကိုအကြားဆက်သွယ်မှုကိုရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု၏လေ့လာမှုများတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု၏လေ့လာမှုများအတွက်ဖြစ်စေ, ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ function ကိုနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းကို examine ပိုသုတေသနအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာအတွက်တိုး maturationally မောင်းနှင်စေခြင်းငှါပေမယ့်ဒါဟာအစအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီ, အန္တရာယ်ရှိတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်မဆင်မခြင်အပြုအမူ၏ပုံစံ၌ဤအကွံကိုထင်ရှားစွာပြကြဘူး, ကြောင်းအလေးပေးဖို့အရေးကြီးပါသည်။ Dahl မှတ်ချက်ပြုသကဲ့သို့ "တချို့ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဘို့ခိုင်ခံ့စိတ်ခံစားမှုကိုသက်ဝင်ဤသဘောထားကိုနှင့်ဤဆှဖှေဲ့သိမ်မွေ့ဖြစ်နဲ့အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူတွေအတွက်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုခံစားချက်တွေကိုဆီသို့ဤအစိတျလုံးဝအဓမ္မဖြစ်ကြောင်း (ထင်ရသော) အသိဉာဏ်လူငယ် "(2004, p ။ 8) ကစိတ်ခံစားမှု-စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်မဆင်မခြင်ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူတွေရန်နှင့်အချိန်များတွင်ထကြွလွယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ယူဆရများစွာသောအချက်တွေအလယ်အလတ်နှင့် ( သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာအစောပိုင်းရင့်ကျက်နှင့်အတူဆိုလိုသည်မှာ,) ရင့်ကျက်အချိန်ကိုက်အပါအဝင်အန္တရာယ်အပြုအမူသို့ရှာကြံအာရုံ၏, ဘာသာပြန်ချက်, modulate, antisocial အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ (ဥပမာထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်းတွေ, ထိုဒီဂရီပေးသောမြီးကောင်ပေါက် '' အပြုအမူစောင့်ကြည့်နေသည်မှ မိဘများနှင့်အခြားလူကြီးများ, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးများရရှိနိုင်မှုနှင့်ထွက်), နှင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုတဲ့သဘောထားကိုများကိုချဲ့ထွင်သို့မဟုတ် attenuate စေခြင်းငှါကဒေါသဓာတ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အပြုအမူ, သဘာဝအားဖြင့် inhibited စိုးရိမ်စိတ်များမြင့်မားဖို့ကျရောက်နေတဲ့, ဒါမှမဟုတ်အထူးသဖြင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လှုပ်ရှားမှုများကနေဝေးရှက်ဖို့မျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ မွေးကင်းစ (ဆိုလိုသည်မှာမြင့်မားမော်တာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ငိုမကြာခဏပြ) သူတို့ကိုသိသိသာသာပို, ဦးနှောက်အာရုံကြောလူကန်လန်နှင့်အနိမ့်-reactive (ဘူးသောသူတို့၏များထက် morose ဖြစ်တွေ့ရှိအဖြစ်မြင့်မားတုံ့ပြန်ဘူးသောမြီးကောင်ပေါက်များ၏ဥပမာ, မကြာသေးမီနောက်ဆက်တွဲKagan, Snidman, Kahn & Towsley, 2007).
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ကျဆင်းဘို့အကောင့်ကကူညီစေခြင်းငှါနှစ်ခုယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည် neurobiological ဖြစ်စဉ်များရှိပါသည်။ သာပမာဏမှာမအာရုံကိုလက်ခံရရှိသည့်ပထမအချို့နဲ့အခြား neurotransmitter ကကမကထပြုခဲ့သော dopaminergic စနစ်, ဒါမှမဟုတ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲဆုလာဘ် sensitivity ကိုပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းနှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နေရာယူကြောင်းနှင့်, အလှည့်အတွက်ဆုလာဘ်-ရှာနုတ် ။ Little က cf. (သို့သော်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှာဆုလာဘ်ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းကိုမသိ, နှင့်စာပေအတွက်ရှေ့နောက်မညီမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူကျန်ကြွင်းဖြစ်ပါတယ် Bjork et al ။ , 2004; Ernst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006), ကြောင့်ဆုလာဘ် salience ၏ခြယ်လှယ်အတွက်လေ့လာမှုများအကြားအတိုင်းအတာများကွဲပြားမှု (ဥပမာအကျိုးစီးပွားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်သို့မဟုတ်မတူညီတဲ့ပြင်းအား၏ဆုလာဘ်ကြားတွင်ဆုလာဘ်အတွက်ရှိမရှိ) နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်ဟာမျှော်လင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်၏အမှန်တကယ်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိဖွယ်ရှိ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြင်၌) ရှာကြံအာရုံထဲမှာအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု၏လေ့လာမှုများအသက်အရွယ် 16 ပြီးနောက်ဒီသဘောထားကိုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းကိုပြသ (Zuckerman et al ။ , 1978), နှင့်အချို့သောအမူအကျင့်သက်သေအထောက်အထား (ရှိMillstein & Halpern-Felsher, 2002) (မြီးကောင်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုဒေတာထွက်ဘွားမြင်တစ်ဦးပုံစံကိုပိုမိုဆုလာဘ်အတွက်အပြောင်းအလဲမှလူကြီးများထက်အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အလားတူသို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အပြောင်းအလဲမှပင်လျော့နည်းထိခိုက်မခံမည်အကြောင်းအကြံပြုခြင်းCauffman et al ။ , 2007).
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက်အန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုအတွင်းကျဆင်းမှု၏တစ်ဦးက (နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်မဟုတ်ပေမယ့်) ကပိုဖွယ်ရှိအကြောင်းမရှိမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သင်တန်းကျော်နှင့် 20s ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်း Self-စည်းမျဉ်းစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စိုးရိမ်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားစိတ္တဇဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် deliberative အရေးယူများအတွက်သီးခြားစွာလူ့စွမ်းရည်အပါအဝင်ကြောင့်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုသိမှတ်ခံစားမှု, သူတို့အလွန်အမင်းအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောရန်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal နှင့် parietal အသင်းအဖွဲ့ cortical နှင့် anterior cingulate cortex ၏အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်မကြာသေးမီကပြောင်းလဲဦးနှောက်စနစ်ဖြင့်ပံ့ပိုးအကြံပေး။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဒီသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏ရငျ့ဖွယ်ရှိမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားမြင်ကြအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်ကျဆင်းဖို့မူလတန်းပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကောင့်ကိုပိုကောင်းခွင့်ပြုထားသည့် Self-စည်းမျဉ်း၌၎င်း, prefrontal cortex နှင့် limbic သည့်စနစ်အကြားအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုများ၏ရငျ့အတွင်းကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍသော prefrontal cortex, အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်အပြောင်းအလဲများပေါ်တွင်အလုပ်တစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏ညှိနှိုင်း။ ဤပြောင်းလဲမှုများအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေလျော့သင့်ပါတယ်အတူတကွအရာ, ထကြွလွယ်သောအာရုံခံစားမှု-ရှာအပြုအမူအပေါ်ဘရိတ်ထားရန်နှင့်ရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခုခံတွန်းလှန်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီခွင့်ပြုသည်။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာသုံးအရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုယခုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည် (ကြည့်ရှု pause, 2005တစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်အဘို့) ။ ပထမဦးစွာ Synaptic တံစဉ်များကို၏ရောင်ပြန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်၏ prefrontal ဒေသများတွင်မီးခိုးရောင်အမှု၌တစ်ဦးကျဆင်းခြင်း, အသုံးမပြုတဲ့အာရုံခံဆက်သွယ်မှုဖယ်ရှားပစ်ထားတဲ့မှတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်လည်းရှိ၏။ အသုံးမပြုတဲ့အာရုံခံဆက်သွယ်မှု၏ဤဖျက်သိမ်းရေး (preadolescence နှင့်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအဓိကအားဖြင့်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ယုတ္တိဆင်ခြင်ခြင်းအဓိကတိုးတက်မှုမြင်ကြပါတယ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်Keating, 2004; Overton, 1990(Mid-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အားဖြင့်ပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်အရှိဆုံးအရာ၏, ထို prefrontal cortex အတွက် Synaptic တံစဉ်များကိုများအတွက်အချိန်ဇယားနှင့်အတူ), တသမတ်တည်းကာဇီ et al ။ , 2005; Casey, Getz, & Galvan, ဤပြissueနာကိုလည်းကြည့်ပါ) ။ ဤအသိမြင်မှုစွမ်းရည်တိုးတက်မှုအချို့သည်အသက် ၂၀ (သို့) ဒီဂရီအထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း (Kail, 1991, 1997), Mid-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက်အပြောင်းအလဲများပြင်းအားအတွက်အလွန်ကျိုးနွံဖြစ်ကြပြီး (အောက်တွင်ကြည့်ပါ), စွမ်းဆောင်ရည် cortical ဒေသများအကြား သာ. ကြီးမြတ်ဆက်သွယ်မှုများကလွယ်ကူချောမွေ့သောအပေါ်အတော်လေးတောင်းဆိုမှုများသိမြင်မှုလုပ်ငန်းများကိုအလုပ်သမားပိုမိုထိရောက်သောအပြောင်းအလဲနဲ့ခွင့်ပြုလေ့လာမှုများအတွက်အဓိကအားဖြင့်မြင်စေလေ့ရှိပါတယ်။ အစောပိုင်းကဖော်ပြထားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်ဆက်စပ်သောစွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောအသက်အရွယ် 16 ပြီးနောက်, မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်နှုတ် fluency အလုပ်လုပ်အဖြစ်အခြေခံသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ, (မတိုးတက်မှုကိုမြင်လျှင်Steinberg et al ။ , 2007).
ဒုတိယအချက်မှာ myelination ၏ရောင်ပြန်သည်ဤတူညီသောဒေသများတွင်အဖြူရောင်အမှု၌တိုး, အာရုံကြောအမျှင် myelin အတွက်အိမ်မှဖြစ်လာရာကနေတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်, ထိုအာရုံကြော circuitry ၏ insulator တွင်လည်းတစ်ဦးစီကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဖက်တီးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှိ။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရာအရပ်ကိုကြာသော prefrontal ဒေသများ၏ Synaptic တံစဉ်များကို, မတူဘဲ, myelination အသက်တာ၏ဒုတိယဆယ်စုနှစ်သို့ကောင်းစွာလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောနှင့်ဖြစ်ကောင်း (ကျော်လွန်Lenroot, Gogtay, Greenstein, ဝဲလ်, Wallace, Clasen, et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex အတွင်းတိုးတက်လာသောဆက်သွယ်မှုအန္တရာယ်များနှင့်ဆုလာဘ်အလေးချိန်ရှေ့ဆက်စီစဉ်, ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုတားစီးအဖြစ်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုများစွာသောရှုထောင့်အပါအဝင်မျိုးစုံ prefrontal ဒေသများအားဖြင့် subserved Higher-အလို့ငှာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်နောက်ဆက်တွဲတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်စပ်နှင့်မျိုးစုံသတင်းရင်းမြစ်များ၏တစ်ပြိုင်နက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည် အချက်အလက်များ၏။ ပမာဏအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အသက်အရွယ် 16 ကျော်လွန်ခြင်းမရှိရငျ့ပြသပေးသောအခြေခံသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့မှလေးစားမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်မတူဘဲကျနော်တို့ (အသက် 18 မှတဆင့်တိုးမြှင့်တော်မူသော) Self-အစီရင်ခံအနာဂတ်တိမ်းညွတ်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်ဒီအသက်အရွယ်ထက် ကျော်လွန်. ဆက်လက်တိုးတက်မှု (ကိုတွေ့ အချိန်ဘာသာရပ်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတဆင့်ပေမယ့်) ကိုအစောပိုင်း 20s မှတဆင့်သာတိုးပွားလာသောမျှော်စင်လန်ဒန်၏လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြောင်းအရွေ့မချခင်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီး posterior ဦးနှောက်ဒေသများကိုသက်ဝင်ကြောင်းတာဝန်များကိုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်မတူဘဲထဲမှာ, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကိုသက်ဝင်ကြောင်းတာဝန်များကိုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည် (အလယ်အလတ်အခက်အခဲ၏တာဝန်များကိုအပေါ်အသက်အရွယ် 16 အကြောင်းကိုအထိ) အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတဆင့်တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်ဟောပြောသည်၏အဆုံးအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိရာ preadolescence (Conklin, Luciana, Hooper, & Yarger, 2007) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တိုးတက်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို (ထိုကဲ့သို့သော Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏အတော်လေးခက်ခဲစမ်းသပ်မှုသည်အတိုင်း, dorsolateral prefrontal cortex ကိုသက်ဝင်သိတာဝန်များကိုအပေါ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူပိုကောင်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်Conklin et al ။ , 2007) သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏အထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုစမ်းသပ်မှု (Luna et al ။ , 2001); နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုအဖြစ် ventromedial prefrontal cortex, (Crone & ဗန် der Molen, 2004; Hooper, Luciana, Conklin, & Yarger, 2004) ။ အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအချို့စမ်းသပ်မှုတစ်ပြိုင်နက် dorsolateral နှင့် ventromedial ဒေသများနှစ်ဦးစလုံးကိုသက်ဝင်ဖြစ်သော်လည်းဤဒေသများ၏ရငျ့သီးသန့် dorsolateral တာဝန်များကိုအပေါ်အတန်ငယ်အစောပိုင်းကစွမ်းဆောင်ရည်ထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့သီးသန့် ventromedial တာဝန်များကိုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇယားတလျှောက်တွင်အရပ်ဌာနကိုယူစေခြင်းငှါအခြို့သောသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် (Conklin et al ။ , 2007; Hooper et al ။ , 2004) ။ အဲဒီနှစျခု prefrontal ဒေသများ differential ကိုသက်ဝင်သိတာဝန်များကိုသုံးပြီးသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုတွေထဲကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာအသက်-related တိုးတက်မှုအလုပ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးအစားများအပေါ်အလယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့ရှိခဲ့ပေမယ့် ventromedial နှင့် dorsolateral တာဝန်များကိုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အကြားမျှအရေးပါသောဆက်စပ်မှုရှိကြ၏ အဆိုပါ ventromedial prefrontal cortex ၏ရငျ့အကြံပြုခြင်းအဆိုပါ dorsolateral prefrontal cortex ၏ရငျ့ကနေကြီးထွားကွဲပြားဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ (Hooper et al ။ , 2004) ။ dorsolateral ဒေသများသက်ဝင်စေဖို့လူသိများအထူးသဖြင့်ခက်ခဲတာဝန်များကိုအပေါ် performance (နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်Crone, Donohue, Honomichl, Wendelken, & Bunge, 2006; Luna et al ။ , 2001).
ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဒေသများတစ်လျှောက်အဖြူကိစ္စဝေစာတွေကို၏စီမံကိန်း၏ပြန့်ပွားအတွက်သက်သေအဖြစ်တတိယ, အထူးသဖြင့်ရှိ cortical ဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှုအတွက် (နှင့် prefrontal cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်ကြား), ဒါပေမယ့် cortical နှင့် subcortical ဒေသများအကြားမသာတိုးဖြစ်ပါတယ် (နှင့် အဆိုပါ prefrontal ဒေသများနှင့် limbic နှင့် paralimbic ဒေသများအကြား,) ကို amygdala, နျူကလိယ accumbens နှင့် hippocampus အပါအဝင် (Eluvathingal, Hasan, Kramer, Fletcher, & Ewing-Cobbs, 2007) ။ ဒါကတတိယခန္ဓာဗေဒပြောင်းလဲမှုကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး၏တိုးတက်လာသောညှိနှိုင်းနဲ့ဆက်စပ်နှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ, အ amygdala, ventral striatum, orbitofrontal cortex ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အရေးကြီးသောတိုင်းဒေသကြီးများ၏တိုးလာဆက်သွယ်မှုအားဖြင့် facilitated တိုးတက်လာသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း, တွင်ထင်ဟပ်ရပါမည် သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ဥပမာ, အ dorsolateral prefrontal cortex, anterior နှင့် posterior cingulate နှင့် temporo-parietal cortical အတွက်အရေးကြီးသော medial prefrontal cortex နှင့်သာလွန်ယာယီ sulcus) နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ) ။ ဤတသမတ်တည်းကျနော်တို့နှစ်လယ်ပိုင်း 20s မှတဆင့် Self-အစီရင်ခံတင်ပြချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တိုးတွေ့ရှိခဲ့ (Steinberg, 2006).
ယင်းသိမှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်အတွက် functional အပြောင်းအလဲများ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ functional လေ့လာမှုများဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူအဓိကအားတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ အများအပြားကကျယ်ပြန်ကောက်ချက်ကဒီသုတေသနကနေရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာလေ့လာမှုများအစောပိုင်းကဖော်ပြထားတဲ့ dorsolateral prefrontal cortex အတွက်ခန္ဓာဗေဒအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတသမတ်တည်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီးများ၏ဟုတ်ပါတယ်, ကိုကျော်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးယန္တရားတစ်ခုတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ထောက်ပြတာပါ။ (ဥပမာ, Stroop, Flanker တာဝန်များကို / Go ကို, antisaccade-အဘယ်သူမျှမ Go) သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလိုအပ်တာဝန်များကိုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ဆန်းစစ် imaging လေ့လာမှုများ (မြီးကောင်ပေါက်လျော့နည်းထိထိရောက်ရောက်လူကြီးများလုပ်ပေးထက်ကွန်ယက်စုဆောင်းဖို့လေ့ကြောင်းပြသနှင့်သူ၏လှုပ်ရှားမှုတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်ဒေသများကြောင်းပါပြီ ဆိုလိုသည်မှာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဒေသများ) (ကပို focal အသက်အရွယ်နှင့်အတူ activated ဖြစ်လာDurston et al ။ , 2006) ။ ဒါဟာ (သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဒေသများ၏ဤ ပို. ပို. focal ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်အတွင်းနှင့်အခြားဒေသများတွင်၎င်း၏စီမံချက်၏ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအားကောင်းထင်ဟပ်ကြောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ cortical ဒေသများအကြားတိုးပွားလာဆက်သွယ်မှုအပေါ်ဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီတစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုအကြံပြုထားသည်; Liston et al ။ , 2006).
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနဲ့လူကြီးအကြားသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအပေါ်တိုးတက်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အကြား, အ dorsolateral prefrontal cortex (Adelman et al, 2002 ၏ activation တစ်ခုတိုးဖြစ်ရှိပုံပေါ်။ , ကာဇီ et al ။ , 2000; Durston et al ။ , 2002; Luna et al ။ , 2001; Tamm et al ။ , 2002;), ဒီအချိန်မှာဒီဒေသများ၏ Synaptic တံစဉ်များကိုနှင့် myelination နှင့်ကိုက်ညီ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားကာလဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ဒဏ်ငွေ-tuning တဦး (ထက် activation အတွက်ခြုံငုံတိုးသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများထဲမှဖြစ်ပေါ်လာသော; ဘရောင်း et al ။ , 2005), ယူဆရ (ဦးနှောက်ဧရိယာများအတွင်းနှင့်ဖြတ်ပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်ဆက်သွယ်မှုအားဖြင့် facilitatedCrone et al ။ , 2006; Luna et al ။ , 2001) ။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဦးချင်းစီကို "prepotent" တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့တောင်းထားတဲ့အတွက်တာဝန်များကိုသုံးပြီးပုံရိပ်လေ့လာမှုများ, အစားဆီသို့ထက်ဝေးကနေကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားနေကဲ့သို့အလင်း (တစ်ဦး antisaccade တာဝန်) ၏အမှတ်, မြီးကောင်ပေါက်အဆိုပါသိမြင်စုဆောင်းဖို့လေ့ကြောင်းပြသကြ ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ကိုလျော့နည်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ (ကိုသက်ဝင်ဒေသများ၏စွမ်းရည်အလွန်အမင်းလူကြီးများပြုထက်Luna et al ။ , 2001) ။ မြီးကောင်ပေါက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကလေးများကျော်ရှိသည်သောအားသာချက်အလုပ်အမှုဆောင် function ကို (အဓိကအားဖြင့်, dorsolateral prefrontal cortex) တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏ရငျ့အတွက် inheres သော်လည်းအနှစ်သာရအတွက်, လူကြီးများ၏သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကမြီးကောင်ပေါက်များ၏ထက်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ '' ဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်တခုကိုတောင်းဆိုချက်များကိုတုံ့ပြန်ပိုမိုထူးခြား activation evince လို့ပဲ။ ဤသည်အလုပ်အမှုဆောင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အတော်လေးအခြေခံစမ်းသပ်မှုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုထိရောက်သော activation လိုအပ်နိုင်ပါသည်ရာအထူးသဖြင့်စိန်ခေါ်မှုတာဝန်များကို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသော်လည်း, အသက် 16 န်းကျင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိသောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်တိုးတက်လာဖို့ရောက်နေပါတယ်။
အဆိုပါသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွန်ယက်ကိုရှင်းလင်းစွာဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, အတော်ကြာမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမကြာခဏဤကွန်ယက်နှင့်လူမှုစိတ်ခံစားမှုကွန်ရက် (အကြားယှဉ်ပြိုင်မှုအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြောင်းအကြံပြုDrevets & Raichle, 1998) ။ ဤသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအပြန်အလှန် (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပါအဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ-အခင်းအကျင်း၏ကျယ်ပြန့်ပတ်သက်နေထားပြီးBechara, 2005; ကုန်သည်များ, 2003), လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်အပြောင်းအလဲနဲ့ (Sanfey et al ။ , 2003), ကိုယ်ကျင့်တရားစီရငျခကျြ (ဂရင်း et al ။ , 2004), နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆုလာဘ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်၏အဘိုးပြတ် (လူယာ et al ။ , 2004; Ernst et al ။ , 2004), အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏အကောင့်တစ်ခုအတွက် (ကုန်သည်များ, 2003) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဥပမာအရ, ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုလူမှု-စိတ်ခံစားမှုကွန်ရက်ကသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွန်ယက်ကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်သည့်အခါပေါ်ထွန်းဖို့ယူဆနေကြသည်။ လူမှု-စိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်ကိုအတော်လေးပိုပြီး activated အခါဒါမှမဟုတ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွန်ယက်ကိုကကမကထပြုခဲ့ဖြစ်စဉ်များနှောင့်အယှက်အခါပိုများသောအထူးသ, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေပိုပြီးဖွယ်ရှိသည်။ ဥပမာ, လူယာ et al ။ (2004) တိုင်းဒေသကြီးများသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော်လည်း, ပိုကြီးတဲ့နှောင့်နှေးဆုလာဘ်ကျော်သေးငယ်ချက်ချင်းဆုလာဘ်တစ်ခု preference ကိုထင်ဟပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ventral striatum, orbitofrontal cortex ၏အတော်လေးတိုးမြှင့် activation နဲ့ဆက်စပ်နှင့် prefrontal cortex medial နေကြတယ်, အားလုံးဒေသများတွင်လူမှု-စိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ကြောင်းပြသကြ (dorsolateral prefrontal cortex, parietal ဒေသများ) ဆုံးဖြတ်ချက်အခြေအနေများဖြတ်ပြီးညီမျှစေ့စပ်နေကြတယ်။ အလားတူပင်နှစ်ခုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ (Matthews က et al ။ , 2004; Ernst et al ။ , 2004) ကိုလူမှုစိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်၏ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာသည်ဟုပြပွဲ (ventral striatum, medial prefrontal cortex) ပိုပြီးရှေးရိုးစွဲရွေးချယ်မှုအပေါ်နှိုင်းယှဉ်အန္တရာယ်များ (သို့သော်အလားအလာမြင့်မားစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်း) ရွေးချယ်မှုများရွေးချယ်ခြင်းကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တဦးတည်းမကြာသေးမီကစမ်းသပ်လေ့လာမှု (ကလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် transcranial သံလိုက်ဆွကနေတစ်ဆင့်ညာဘက် dorsolateral prefrontal cortical function ကို၏ယာယီပြတ်တောက် (သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအရေးပါဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဒေသ၏ဆိုလိုသည်မှာပြတ်တောက်) တိုးမြှင့်ကြောင်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေရှာတွေ့Knoch, Gianotti, Pascual-Leone, Treyer, မှတ်, Hohmann, et al ။ , 2006).
cortical နှင့် Subcortical function ကိုညှိနှိုင်းရေး
တစ်ဦးကစက္ကန့်, ဒါပေမယ့်ဒီထက်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက် function ကိုအပြောင်းအလဲ (စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွသော, ဥပမာ, မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ) စိတ်ခံစားမှုအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှငျ့ပတျသကျသောတာဝန်များကိုအတွက်မျိုးစုံဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏တိုးပွားလာပါဝင်ပတ်သက်မှုပါဝငျသညျ။ (လူကြိုက်များသောဆယ်ကျော်သက် ' "စိတ်လှုပ်ရှားမှု" အတွက်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသော) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါကကျယ်ပြန့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ် limbic လှုပ်ရှားမှုပြသသောအစီရင်ခံထားခဲ့သော်လည်း, ဒီတသမတ်တည်းကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့လေ့လာမှုတွေမှာတော့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက် (ဥပမာထက်အတော်လေးပိုပြီး limbic activation ဆီသို့တဲ့သဘောထားကိုပြသပြု Baird, Gruber, Fein, Maas, Steingard, Renshaw, et al ။ , 1999; Killgore & Yurgulen-Todd, 2007) သို့သော်အခြားသူများတွင်မြီးကောင်ပေါက်များသည် prefrontal ထက်ပိုမိုသောလှုပ်ရှားမှုကိုပြသသည် (ဥပမာ၊ Baird, Fugelsang, & Bennett က, 2005; Nelson, McClure, ဘုန်းတော်ကြီး Zarahn, Leibenluft, Pine, & Ernst, 2003) ။ တာလှုံ့ဆော်မှုအတိအလင်းသို့မဟုတ် subliminally တင်ပြကြသည်ဖြစ်စေ, အသုံးပြုတဲ့လှုံ့ဆော်မှုအပေါ်မူတည်လျက်, ပါဝင်သူအဆိုပါစိတ်ခံစားမှုတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပစ္စည်းအချို့ကိုသည်အခြားရှုထောင့်မှအာရုံစိုက်ဖို့တောင်းနေသည်ရှိမရှိအဆိုပါပါဝင်သူအားတိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက် (ဥပမာ, ) ။ ဒီစာပေ၏တစ်ဦးထက်ပိုသောသတိစာဖတ်ခြင်း (သူတို့ကပို "စိတ်ခံစားမှု" ဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်) စိတျပိုငျးဆိုငျရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါဆယ်ကျော်သက် subcortical ဦးနှောက်စနစ်များကို Activation မှပြတ်ပြတ်သားသားပိုပြီးကျရောက်နေတဲ့လူကြီးများထက်ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့မျိုးစုံ cortical သက်ဝင်စေဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိစေခြင်းငှါ တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့် subcortical ဒေသများ, သိမှတ်ခံစားမှု၏ထပ်တူအတွက်လူကြီးများမှဆွေမျိုးလိုငွေပြမှု, အကြံပြုခြင်းများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ဦးနှောက်ဒေသများဖြတ်ပြီး Cross-ဆွေးနွေးချက်၏ဤမရှိခြင်းအပြည့်အဝ (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏ပုံစံသရုပ်ဖော်) စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲအူခံစားချက်တွေကိုအပေါ်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းလာသောအခါတစျဦးရဲ့အူခံစားချက်များကို (ရသောဆယ်ကျော်သက်မှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးခံရဖို့်၏သိပ်စဉ်းစားမသာရလဒ်များ ထို့အပြင်) အခြိနျမှနျမှပြုပါ (ကိုလညျးရှု Reyna & Farley, 2006အလိုလိုသိ, သို့မဟုတ် "အကျဉ်းချုပ်-based," ဆုံးဖြတ်ချက်ချ) တွင်မြီးကောင်ပေါက် '' ချို့တဲ့တဲ့ဆွေးနွေးမှုသည်။ အနည်းငယ်စာဖတ်သူတွေကိုပိုပြီး Impulse နှင့်လူကြီးများထက်မြီးကောင်ပေါက်အကြားလျော့နည်း deliberative စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများ၏စကားကိုနားထောငျဖို့အံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်တဦးတည်းမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာ (Baird, Fugelsang, & Bennett က, 2005), ရသောအခါခဲ့ကြသည် "ကောင်းသောစိတ်ကူးများ," မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်မေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်ရန်ထက် (ဆိုလိုသည်မှာပိုမိုဆွေးနွေးခဲ့သည်) သိသိသာသာရှည်ကို ယူ. တစ်လျော့နည်းကျဉ်းမြောင်းစွာ activated) ငါးမန်းနှင့်အတူရေကူး, မီးပေါ်မှာတဦးတည်းရဲ့ဆံပင် setting အချို့သိသာအန္တရာယ်လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာရှိမရှိမေးခဲ့တယ် အထူးသဖြင့် dorsolateral prefrontal cortex အတွက်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်ဒေသများတွင်၏ဖြန့်ဝေထား - တုံ့ပြန်မှုတားစီးအတွက်အသက်အရွယ်ခြားနားချက်များ Luna ရဲ့လေ့လာမှုဆင်တူတဲ့ရလဒ် (Luna et al ။ , 2001) ။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူကြီးများအလားတူဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ကို Activation အလားတူပုံစံများပြသရှိရာမေးမြန်းလှုပ်ရှားမှုများသို့သော် (ဥပမာ, သုပ်စားခြင်း, လမ်းလျှောက်တာ), အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုမဟုတ်ကြသည့်အခါအမှုမဟုတျဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အနှစ်သာရကစေခြင်းငှါမဟုတ်ဘဲစဉ်းစားတွေးခေါ်ကျော်ထိခိုက်စေ၏ကြီးစိုးထက်ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကပေမယ့်အမှန်တကယ်အလားတူ neurobiological ဇာစ်မြစ်ရှိစေခြင်းငှါ (Impulse စဉ်းစားများနှင့်မဟုတ်ဘဲ Impulse သရုပ်ဆောင်ထက် overthinking မတိုင်မီသရုပ်ဆောင်) အပြုအမူအတော်လေးကွဲပြားခြားနားကြသည်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှစ်ခုပုံစံများအတွက်ရလဒ်များ။
အကြားတိုးတက်ဆက်သွယ်မှုများကလွယ်ကူချောမွေ့သောအခြေခံသတင်းအချက်အလက်-အပြောင်းအလဲနဲ့အသက်အရွယ် 16 အားဖြင့် prefrontal cortex ၏ရငျ့ခွငျးအားဖွငျ့ facilitated နှင့်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံသောစွမ်းရည်, အကြိုးသကျရောနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏ညှိနှိုင်းလိုအပ်ကြောင်းစွမ်းရည်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအကြားယာယီကွာဟမှု cortical ဒေသများနှင့် cortical နှင့် subcortical ဒေသများအကြားနှင့်သောနောက်ပိုင်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အတွက်သရုပ်ဖော်နေသည် ပုံ 1။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်း (အစောပိုင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ 10 နှစ်အရွယ်မှ 30 ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကနေဒေတာတွေကိုအပေါ်အခြေခံသည်Steinberg et al ။ , 2007) ။ graphed နှစ်ခုစွမ်းရည်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (စမျးသပျမှုအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေါင်းစပ်တဲ့ပေါင်းစပ်ရမှတ်ဖြစ်သည့်အခြေခံဉာဏစွမ်းရည်ဖြစ်ကြ၏Thompson က-Schill, 2002), ဂဏန်း-span နှင့်နှုတ် fluency; Impulse, အန္တရာယ်အမြင်, အာရုံခံစားမှု-ရှာအနာဂတ်တိမ်းညွတ်နှင့်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှခုခံ၏ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံများ၏ရမှတ်များ composites ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်။ ဤအစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်မှလေးစားမှုနဲ့အတူရင့်ကျက်လုပ်ငန်းဆောင်တာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏ထိရောက်သောညှိနှိုင်းလိုအပ်သည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အသိပညာဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုပေါ်မှာငါတို့နမူနာအတွက် 26 နှစ်အရွယ်ဖို့ 30- ၏ယုတ်အဆင့်မှာဒါမှမဟုတ်အထက်ဂိုးသွင်းတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်တစ်ဦးချင်းစီ၏အချိုးအစားပြသထားတယ်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းကိုညွှန်ပြနှင့်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းအဖြစ်အခြေခံဉာဏစွမ်းရည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့၏ဖြစ်စဉ်ကိုပွညျ့စုံ၏ရှည်လျားသောမီ, အသက်အရွယ် 16 န်းကျင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့ - ကောင်းစွာလုလင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအနှစ်သို့။
ပညာတတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်၏ညွှန်းကိန်းအပေါ် 26- 30- မှနှစ်ကြားရှိများအတွက်အတောအတွင်းမှာသို့မဟုတ်အထက်အသီးအသီးအရွယ်အုပ်စုကိုအမှတ်ပေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏အချိုးအစား။ မှ Steinberg et al ။ , 2007.
သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Peer မှဦးနှောက်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်တော်လှန်ရေးများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အပြောင်းအလဲများ
cortical နှင့် subcortical ဒေသများအကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောချိတ်ဆက်မှုကိုလည်းငါမှတ်ချက်ချအဖြစ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ပြောင်းလဲမှုများနားလည်သဘောပေါက်ဘို့သက်ရောက်မှုရှိပြီး, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအပြုအမူအန္တာရာယ်မှအရေးပါသောပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ခုခံကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်, လူမှု-စိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်၏ activation မှတဆင့်ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွသောထကြွလွယ်သောဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူ၏သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်လူမှုစိတ်ခံစားမှုကွန်ရက်များအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်သောအတိုင်းအတာအထိဒီစည်းမျဉ်းဖြစ်စဉ်ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကျနော်တို့နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့အနည်းဆုံးအားဆက်လက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏သင်တန်းကျော်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ခုခံအတွက်အကျိုးအမြတ်မြင်ရပါလိမ့်မယ် (အချင်းချင်းဒေသဆက်သွယ်မှု၏ရငျ့အခါ နေဆဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော) ။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ Self-အစီရင်ခံခုခံအတွက်အကျိုးအမြတ် (အနည်းဆုံး 18 သည်အထိဆက်လက်ကြောင်းပြသရသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်တွေ့ပြီအဘယျသို့တိကျစွာဖြစ်ပါသည်စာနယ်ဇင်းအတွက် Steinberg & Monahan), နှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူအပေါ်ရွယ်တူ၏ရှေ့မှောက်တွင်၏အမှန်တကယ်သက်ရောက်မှု (အသက်အတွက် 20 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှကောလိပ်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအကြားတွင်နေဆဲထင်ရှားကြောင်းGardner & Steinberg, 2005).
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ခုခံအကြားဆက်ဆံရေးနှစ်ဦးကိုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများဤဆင်ခြေများအတွက်ထပ်မံပံ့ပိုးကူညီမှုပေး။ လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက် (အမျက်ထွက်လက်လှုပ်ရှားမှုများကိုသို့မဟုတ်အမျက်ထွက်မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ၏ကလစ်ပ်) ပါဝင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုနှိုးဆွသောဗီဒီယိုနှင့်ထိတွေ့နေသော 43 10 နှစ်အရွယ်တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာအပေါ်အတော်လေးနိမ့်ရမှတ်များနှင့်အတူတွေ့ရှိခဲ့ အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ရမှတ်များနှင့်အတူသူတို့အားဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ဤ action ကို-processing ဒေသများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအကြား သာ. ကြီးမြတ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသသော်လည်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ခုခံ, အခြားသူများ '' လုပ်ရပ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ, ညာ dorsal premotor cortex) ၏အမြင်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဒေသသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ် activation ပြသ (ဆိုလိုသည်မှာ dorsolateral prefrontal cortex); တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ခံစားမှု-ကြားနေကလစ်များနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမှု (ရှုလေ့လာကြသည်မဟုတ်Grosbras, Jansen, Leonard, McIntosh, Osswald, Poulsen, et al ။ , 2007) ။ ဤရလဒ်သည်သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်နေသောလူတစ်ဦးချင်းစီပုံမှန်မဟုတ်အခြားသူတွေအတွက်အမျက်ဒေါသ၏အရိပ်လက္ခဏာအားဖြင့်နှိုးဆော်ခြင်းပေမယ့်ထိုကဲ့သို့လှုံ့ဆော်မှုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုမှလျော့နည်းနိုင်ပါစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တစ်စက္ကန့်လေ့လာမှုအတွက်, (12 မှ 18 အသက်) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအကြားဦးနှောက် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ခုခံအတွက်အနိမ့်သာရှိပြီးပြည်ပမှမြင့်မားတဲ့အမှတ်ပေး၏ကျနော်တို့အသက်အရွယ်အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်ခုခံအတွက်မြင့်မားတဲ့မြီးကောင်ပေါက် သာ. ကြီးမြတ်၏သက်သေအထောက်အထားများပြသသော morphological သက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရ premotor နှင့် prefrontal ဒေသများအကြားအခြေခံအဆောက်အဦးဆက်သွယ်မှု, ရွယ်တူချင်းဖိအားကိုတှနျးလှနျဖို့ပိုနိုင်ပါပုဂ္ဂိုလ်များအကြားကဤကွန်ရက်ပိုမိုမကြာခဏတစ်ပြိုင်တည်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ကိုက်ညီမယ့်ပုံစံ (pause, Toro, Leonard, Lerner, Lerner, Perron, et al ။ , စာနယ်ဇင်းအတွက်) ။ ဒါ့အပြင် (ရွယ်တူချင်းဖိအားမှထကြွလွယ်သောလွယ်ကူစွာထိခိုက်တန်ပြန်လို) သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအရင်းအမြစ်များကြောင့်စုဆောင်းမှုဖေါ်ပြခြင်းအလုပ်ကိုတိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများအကြားပိုမိုအားကောင်းဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြား သာ. ကြီးမြတ်သည်ဤတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ် (Liston et al ။ , 2005) ။
ပေါင်းလဒ်များတွင်အန္တရာယ်နှစ်ယောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြားကျဆင်းမှုယူပြီးနှင့်ဖြစ်ကောင်း, သုံးအကြောင်းရင်းများ။ ပထမဦးစွာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏ရငျ့, အ prefrontal cortex အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်, တစ်ဦးချင်းစီ '' စွမ်းရည်ရေရှည်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတားစီးဖို့ခိုင်မာစေ။ ဒုတိယအချက်မှာ cortical ဒေသများတစ်လျှောက်နှင့် cortical နှင့် subcortical ဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှုများရငျ့လူမှုရေးနှင့်အတူအလွန်အကျွံ deliberative ဆုံးဖြတ်ချက်ချ modulate ရန်, ပိုကောင်းတဲ့အပြန်အလှန်, လူမှုရေးအရ modulate နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု deliberative ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အတူစိတျနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီခွင့်ပြုထားသည့်သိမှတ်ခံစားမှု၏ညှိနှိုင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ နှင့်စိတ်ခံစားမှုသတင်းအချက်အလက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှိဆုလာဘ် salience နှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကိုပြောင်းလဲကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြီးနောက် neurotransmission ၏ပုံစံများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေမယ့်ဒီအဓိပ္ပာယ်ဘာမှပြောနေမတိုင်မီနောက်ထပ်အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological သုတေသနလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်။
များစွာသောအရိုအသေခုနှစ်, ထို့နောက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါနှင့်စိတ်ခံစားမှု-လူမှုနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွန်ရက်များ (အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်၏ထုတ်ကုန်အဖြစ်ကရှင်းပြခဲ့သည်Drevets & Raichle, 1998), နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ယခင်ရုတ်တရက်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမဟုတ်တော့ကာလအတွင်း, သာတဖြည်းဖြည်းအဆုံးစွန်သောအကျိုးအမြတ်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအနေဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်စမှာပိုပြီးမှနျကွောငျးဝနျခံသောဖြစ်လာရသောကာလပင်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာလူမှုစိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်ကိုပင်အစောပိုင်းနှင့်အလယ်တန်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအဆက်မပြတ်မြင့်မားသော activation တစ်ပြည်နယ်ထဲမှာမကြောင်း, သို့သော်, သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ လူမှု-စိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်ကိုအလွန်အမင်း (ဥပမာ, တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ခံစားမှုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်မဟုတ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းဖြစ်သည့်အခါ) activated မရသောအခါအမှန်စင်စစ်သည်, မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်ကွန်ယက်ကိုပင်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌, ထကြွလွယ်သောနှင့်အန္တရာယ်များအပြုအမူအပေါ်စည်းမျဉ်းထိန်းချုပ်မှုစည်းကြပ်ရန်လုံလောက်သည်တန်ခိုးရှိ၏ (တစ်ဦးချင်းစီတစ်ဦးတည်းရှိကြ၏သောအခါကြှနျုပျတို့ 14 ပျမ်းမျှအဘယ်သူသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် 34 ပျမ်းမျှအဘယ်သူသည်လူကြီးများအကြားအန္တရာယ်-ယူပြီးမအသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုမောင်းနှင်မှုဂိမ်းလေ့လာမှုအတွက်မှတ်မိGardner & Steinberg, 2005) ။ ရွယ်တူချင်းအများတို့ရှေ့၌သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal ၏အခြေအနေများအောက်တွင်သို့သော်လူမှုစိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်ကိုလုံလုံလောက်လောက်အဆိုပါသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွန်ရက်၏စည်းမျဉ်းထိရောက်မှုလျော့ဖို့ activated ဖြစ်လာသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလူကြီးအသုံးပြုပုံပင်ကြီးထွား arousal ၏အခြေအနေများအောက်တွင်နိုင်အောင်, ထိုသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကွန်ရက်ရင့်ကျက် (ကျနော်တို့လက်ရှိအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု arousal မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးစဉ်အတွင်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ် differential ကိုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ဆန်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Lab ထဲမှာသုတေသနစတင်နေကြသည်) လူမှု-စိတ်ခံစားမှုကွန်ယက်တွင်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေဆီသို့စိတျ modulated နိုင်ပါသည်။
ဒီရေးဆွဲရေးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်း ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်မဟုတ်ဘဲမြီးကောင်ပေါက်တစ်ဦးထက်ပိုအမြတ်အစွန်းမဟာဗျူဟာမှနုတရားသဖြင့်စီရင်ဘို့ကန့်သတ်အခွင့်အလမ်းများကိုအာရုံစိုက်စေခြင်းငှါ, အန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှုများရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းထက်, သူတို့ကထိုပြဿနာကိုသိဒါမှမဟုတ်နားမလည်သောအရာကိုထင်သို့မဟုတ်သောလမ်းမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြု extant သုတေသနပေးထား အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အကျိုးဆက်များရှိသည်။ ငါသည်ဤဆောင်းပါးကိုဖို့နိဒါန်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအားလုံးအမေရိကန်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားထက် ပို. 90% ဟာသူတို့ရဲ့ကျောင်းတွေမှာလိင်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ယာဉ်မောင်းပညာရေးခဲ့ကြသေးသူတို့ထဲကကြီးမားတဲ့အချိုးအစားနေဆဲမလုံခြုံလိင်, Bing သောက်စရာ, မီးခိုးစီးကရက်ရှိသည်, တစ်ချိန်တည်းမှာအချို့အားလုံး (ဆငျမခွမောင်း; Steinberg, 2004) ။ ထိုကဲ့သို့သော, အရက်ရောင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်တားဆေးန်ဆောင်မှုမှဆယ်ကျော်သက် '' access ကိုတိုးချဲ့, နှင့်မောင်းနှင်မှုအသက်အရွယ်ပြုစုပျိုးထောင်ဖွယ်ရှိဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်ကန့်သတ်အတွက်ပိုပြီးထိရောက်ပါလိမ့်မယ်ပိုပြီးသို့သော်အခြေအနေကိုသေချာစွာ, စီးကရက်၏စျေးနှုန်းပြုစုပျိုးထောင်အဖြစ်မဟာဗျူဟာများ, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, မြီးကောင်ပေါက်, ပညာရှိလျော့နည်းထကြွလွယ်သော, သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းမျွောစေရန်ကြိုးစားမှုထက်များနှင့်မော်တော်ယာဉ်သေဆုံးခဲ့ပြီး။ တချို့ကအမှုအရာပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန် ယူ. , ရင့်ကျက်တရားစီရင်ခြင်းကိုဖြစ်ကောင်းသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါသုတေသန, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေစံတန်ဖိုးဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်းအကြံပြုဇီဝမောင်းနှင်နှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိလွှဲမရှောင်သာ။ အနည်းငယ်သာကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှသို့မဟုတ်အပျိုဖော်ဝင်စမှာရာအရပ်ကိုကြာကြောင်းဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်ပြောင်းကုန်ပြီ, ဖွယ်ရှိဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇစ်မြစ်ရှိပါတယ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းကုန်ပြီ attenuate သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးစေရန်ဖြစ်စေလုပ်ဖို့်၏ဖြစ်ကောင်းရှိပါသည်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းအရည်အချင်းကို၏ရငျ့အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမသုတေသနလုပ်ငန်းဤအမှုကိုပြုသောနိုင်ပါတယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ (သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်တူညီတဲ့အသက်အရွယ်၏တစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်, Plan များနှင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုသင်တို့သိကြပါ, ဤလက္ခဏာများအတွက်မူကွဲအန္တရာယ်များနှင့် antisocial အပြုအမူအတွက်မူကွဲနဲ့ဆက်စပ်နေတာကြောင့်Steinberg, 2008) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်အပေါ်မိသားစုလွှမ်းမိုးမှုဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများတစ်ဥစ္စာဓနသော authoritative မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေအိမ်များမှာကြီးပြင်းသူမြီးကောင်ပေါက် (ဆိုလိုသည်မှာနွေးကြောင်းမိဘအုပ်ထိန်းပေမယ့်မြဲမြံစွာ) ကိုပိုမိုရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များသို့မဟုတ် antisocial အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြလျက်ရှိ၏ပေမယ့် အပြုအမူ (Steinberg, 2001), ကြှနျုပျတို့သညျဤ link ကို Self-စည်းမျဉ်းများ၏အခြေခံစစ်စခန်းပြောင်းလဲမှုများကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှိမရှိ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အဓိကအားဖြင့်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အခြေအနေများနှင့်တ္ထုများမှဆယ်ကျော်သက် '' access ကိုအပေါ်ပြင်ပသတ် (မိဘစောင့်ကြည့်မှုမှတဆင့်) ၏စည်းကြပ်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိမသိရပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်ပြောင်းလဲ Self-စည်းမျဉ်းစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါရှိမရှိလေ့လာဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုဆက်စပ်အချက်များ, နှစ်ဦးစလုံးအတွင်းအပြင်နှင့်မိသားစုအပြင်ဘက်, Self-စည်းမျဉ်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသြဇာလွှမ်းမိုး, ဤဖြစ်စဉ်များများ၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုနားလည်ခြင်း, လူငယ်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့အမြင့်မားဦးစားပေးဖြစ်သင့်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏အဘိတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (1R21DA022546-01) ရက်နေ့တွင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Juvenile တရားမျှတမှုအပေါ် John D. နှင့်ကက်သရင်းတီ MacArthur Foundation မှသုတေသနကွန်ယက်ကနေငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်နှင့်အမျိုးသားအင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။ ဤစာတမ်း၏အကြောင်းအရာ, သို့သော်, တစ်ခုတည်းကိုသာစာရေးသူ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်သေချာပေါက်ကဤအဖွဲ့အစည်းများ၏တရားဝင်အမြင်များကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်မအပေါ်သူတို့၏မှတ်ချက်များအတွက် MacArthur Juvenile စွမ်းဆောင်ရည်လေ့လာမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဘို့နှင့် BJ Casey, Monique Ernst, ဒန်နီထင်းရူး, Cheryl Sisk နှင့်လင်ဒါလှံဖို့ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များကမာရီ Banich, အဲလစ်ဇဘက် Cauffman, စန်ဒရာဂရေဟမ်နှင့်ဂျနီဖာ Woolard မှကျေးဇူးတင်တယ် လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ယခင်မူကြမ်း။ ငါသည်ဤစာတမ်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုငါ၏ tyronic နှင့်ဝန်ခံရမည်ဇယားကိုတစေ့တစောင်းဆွေးနွေးမှု enabled သည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience ၏ဧရိယာမှာသူတို့ရဲ့ tutelage အတွက်လည်းဒန်နီထင်းရူးအဖြစ်သုန်ချိန်မှအကြွေးဖြစ်၏။ ယုတ္တိဗေဒသို့မဟုတ်နားလည်မှုအတွက်မဆိုကွာဟချက်ကျောင်းသားအပေါ်ထင်ဟပ်မဟုတ်ဘဲမိမိအဆရာများဖြစ်ကြသည်။
1အပြည့်အဝ Zuckerman စကေးပေါ်တွင်ပစ္စည်းအတော်များများအာရုံကိုရှာ Impulse ကိုတိုင်းတာဖို့မပေါ်လာ (ဥပမာ "ကျွန်မမကြာခဏချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့အပေါ်အမှုအရာလုပ်ပါ။ ") ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီအတွက် Impulse ၏သီးခြားအတိုင်းအတာရှိသောကြောင့်, ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသာ Zuckerman ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ (ဥပမာ "ကျွန်မတစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားထိတ်ဖြစ်ကြောင်းအမှုတို့ကိုပြုလို။ ") thrill- သို့မဟုတ်အသစ်အဆန်း-ရှာကြံရည်ညွှန်း။
Adleman N ကို, Menon V ကို, Blasey ကို C, အဖြူရောင်ကို C, Warsofsky ငါဂလိုဗာ, G, အ Stroop အရောင်-နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတာဝန်၏ Reiss အေတစ်ဦးကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ fMRI လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2002;16: 61-75 ။ [PubMed]
fMRI နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထား: အာရုန်ငါ Etcoff N ကို, Ariely: D, Chabris ကို C, O'Connor အီး, Breiter အိပ်ချ်လှပမျက်နှာများ variable ကိုဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုရှိသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2001;8: 537-551 ။ [PubMed]
လူ့လူမှုရေးအပြုအမူများ၏အဒေါ့ဖ် R. သိမှုမှ neuroscience ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2003;4: 165-178 ။
Andersen က S နဲ့, Thompson ကတစ်ဦး, Krenzel အီး, gonadal ဟော်မုန်းအတွက် Teicher အမ် Pubertal အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက် dopamine အဲဒီ receptor overproduction အခြေခံကြပါဘူး။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002;27: 683-691 ။ [PubMed]
လူငယ်အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးရှင်သန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: Babalola အက်စ်သက်တူရွယ်တူအပြုအမူနှင့်ရဝမ်ဒါအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏အချိန်ကိုက်ခံစား။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 2004;33: 353-363 ။
Baird တစ်ဦးက, Fugelsang J ကို, Bennett က C. သငျသညျအဘယျသို့စဉ်းစားခဲ့ကြ ?. ဆယ်ကျော်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု; အဆိုပါ 12th နှစ်ပတ်လည်သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံလူ့အဖွဲ့အစည်း (CNS) အစည်းအဝေးတွင်တင်ပြပိုစတာ; နယူးယောက်။ 2005 ။ ဧပြီ,
Baird တစ်ဦးက, Gruber က S, Fein: D, Maas L ကို, Steingard R ကို, Renshaw P ကို, et al ။ မျက်နှာ၏ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အသိအမှတ်ပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ကလေးအမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 1999;38: 195-199 ။ [PubMed]
Baron-Cohen ကိုက S, Tager-Flusberg T က, Cohen ကို: D, အယ်ဒီတာများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမြင်မှုမှ neuroscience ကနေပတ်သ က်. : သည်အခြားစိတ်ကိုနားလည်ခြင်း။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1999 ။
Bearman P ကို, ဂျုံးစ် J ကို, Udry JR ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေးအမျိုးသား longitudinal လေ့လာမှု: သုတေသနဒီဇိုင်း။ Chapel Hill, NC: ကာရိုလိုင်းနားပြည်သူ့အင်အားရေးစင်တာ; 1997 ။
Bechara အေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံး: တစ် neurocognitive ရှုထောင့်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005;8: 1458-63 ။
Bechara တစ်ဦးက, Damasio တစ်ဦးက, Damasio H ကို, Anderson ကအက်စ်အာရုံမခံစားနိုင်သောလူ့ prefrontal cortex ပျက်စီးမှုအောက်ပါအနာဂတ်အကျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ သိမှတ်ခံစားမှု။ 1994;50: 7-15 ။ [PubMed]
Berg ကဒဗလျူ, အလုပ်တခုကိုဖြေရှင်းရေးဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ Spatial ပြဿနာ Byrd တို့ပါပဲဃအဆိုပါမျှော်စင်: မြှင့်တင်ခြင်းလက်တွေ့နှင့်သုတေသနအကောင်အထည်ဖော်မှု။ စမ်းသပ်နှင့်လက်တွေ့ Neuropsychology ၏ဂျာနယ်။ 2002;25: 586-604 ။
Berridge KC ။ လူသားများနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်နှိုငျးယှဉျ။ ခုနှစ်တွင်: Davidson RJ, ရွှေပန်းထိမ်နာရီ, Scherer K ကိုအယ်ဒီတာများ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသိပ္ပံ၏လက်စွဲစာအုပ်။ အောက်စဖို့ဒ: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2003 ။ စစ။ 25-51 ။
လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်: Beyth-Marom R ကို, Austin, L, Fischoff B, Palmgren က C, Jacobs-Quadrel အမ်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ၏အကျိုးဆက်များခံစား။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 1993;29: 549-563 ။
Bjork J ကို, Knutson B, Fong သည်, G, Caggiano: D, Bennett က S နဲ့, ဆယ်ကျော်သက်အတွက် Hommer ဃယ့-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: အလားတူနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;24: 1793-1802 ။ [PubMed]
Blum R ကို, နယ်လ်ဆင်-Mmari K. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်လူငယ်များ၏ကျန်းမာရေး။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2004;35: 402-418 ။ [PubMed]
Brooks-ဂွန် J ကို, Furstenberg အက်ဖ်, Jr ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်။ 1989;44: 249-257 ။ [PubMed]
ရွယ်တူချင်းအတူဘရောင်းခပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' ဆက်ဆံရေး။ ခုနှစ်တွင်: Lerner R ကို, Steinberg L ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။2။ နယူးယောက်: Wiley; 2004 ။ စစ။ 363-394 ။
ဘရောင်း T က, သည်များ H ကို, Coalson R ကို, Miezin က F, Petersen က S, Schlaggar ခ Developmental စကားလုံးမျိုးဆက်များအတွက်လူ့ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2005;15: 275-90 ။ [PubMed]
Buchanan ကို C, ဒ J ကို, Becker ကဂျေဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ဟော်မုန်း၏သားကောင်များမြီးကောင်ပေါက် Are ?: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှာစိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်ဟော်မုန်း Active သက်ရောက်မှုများအတွက်အထောက်အထား။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1992;111: 62-107 ။ [PubMed]
နားလည်မှုဟော်မုန်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်, မျိုးဆက်ပွားဝင်ရိုး၏ pubertal activation နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို: ဟော်မုန်း, အပြုအမူများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိခိုက်စေအကြားကင်မရွန်ဂျေ Interrelationships ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 110-123 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, Giedd J ကိုသောမတ်စ် K. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း။ ဇီဝဗေဒစိတ်ပညာ။ 2000;54: 241-257 ။ [PubMed]
Cauffman အီး, Claus အီး, Shulman အီး, Banich M က, ဂရေဟမ်က S, Woolard J ကို, Steinberg L. ဆယ်ကျော်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ: အန္တရာယ် preference ကိုသို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်အာရုံမခံစားနိုင်သော? 2007 ။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
Cauffman အီး, Steinberg L ကို, Piquero အေစိတ်ဓာတ်, neuropsychological နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အလေးအနက် antisocial အပြုအမူ၏ psychophysiological ဆက်စပ်မှု: Self-ထိန်းချုပ်မှုများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Criminology ။ 2005;43: 133-176 ။
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ။ လူငယ်အန္တရာယ်အပြုအမူ Surveillance-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, 2005 ။ ရောဂါနှင့်သေဆုံးမှုအပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာ။ 2006;55(SS5): 1-108 ။ [PubMed]
ကုန်သည်များ R ကို, တေလာ J ကို, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများ Potenza အမ် Developmental neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2003;160: 1041-1052 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chassin L ကို, Hussong တစ်ဦးက, Barrera M က, Jr က Molina B ကို, အနားသတ်ရန် R ကို, Ritter ဂျေဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း။ ခုနှစ်တွင်: Lerner R ကို, Steinberg L ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။2။ နယူးယောက်: Wiley; 2004 ။ စစ။ 665-696 ။
Chibbar R ကို, Tomas J ကို, Mitchell က B, pubertal ကြွက်များတွင် gonadal steroids အားဖြင့်အာရုံကြော oxytocin ဗီဇထုတ်ဖော် Miller ကအက်ဖ်စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ မော်လီကျူးဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1990;4: 2030-2038 ။ [PubMed]
Cicchetti: D, Dawson G. အအယ်ဒီတာ့အာဘော်: ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအကွိမျမြားစှာအဆင့်ဆင့်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Psychopathology ။ 2002;14: 417-420 ။ [PubMed]
Collins WA, လူ့အခြေအနေတွင် Steinberg အယ်လ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ လူမှုရေး, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်။ ခုနှစ်တွင်: Eisenberg N ကို, Damon W က, Lerner R ကို, အယ်ဒီတာများ။ ကလေးစိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။ နယူးယောက်: Wiley; 2006 ။ စစ။ 1003-1067 ။
Conklin H ကို, Luciana M က, Hooper က C, ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် Yarger R. အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်: အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အပြုအမူသက်သေအထောက်အထား။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Neuropsychology ။ 2007;31: 103-128 ။ [PubMed]
Crone အီး, ဗန် der Molen အမ် Developmental အစစ်အမှန်ဘဝဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ပြောင်းလဲ: ယခင်က ventromedial prefrontal cortex အပေါ်မူတည်မှပြသနေတဲ့လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Neuropsychology ။ 2004;25: 251-279 ။ [PubMed]
Dahl R. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: အားနည်းချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများတစ်ဦးကကာလ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 1-22 ။ [PubMed]
စိန်ဂျေ တတိယချင်ပန်ဇီမျောက်: လူ့တိရိစ္ဆာန်များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်အနာဂတ်။ နယူးယောက်: HarperCollins; 1992 ။
DiBlasio က F, ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏သီအိုရီအတွက် Benda ခကျားကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ။ 1992;27: 221-240 ။
DiIorio ကို C, Dudley W က, ကယ်လီက M, Soet J ကို, Mbwara J ကို, ရှပ် Potter ဂျေလူမှု 13- အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုသိမြင်မှုဆက်စပ်မှု 15 နှစ်အရွယ်မြီးကောင်ပေါက်မှတဆင့်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2001;29: 208-216 ။ [PubMed]
Drevets W ကအဆင့်မြင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှိုင်းယှဉ်စိတ်ခံစားမှုကာလအတွင်းဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု၏ Raichle အမ်အပြန်အလှန်ဖိနှိပ်မှု: စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအကြားအပြန်အလှန်အဘို့အဂယက်ရိုက်။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် Emotion ။ 1998;12: 353-385 ။
Dumont N ကို, Andersen က S နဲ့, Thompson ကတစ်ဦး, prefrontal cortex အတွက် Teicher အမ်ယာယီ dopamine ပေါင်းစပ်မော်ဂျူ: စသည်တို့လေ့လာမှုများ၌။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဦးနှောက်သုတေသန။ 2004;150: 163-166 ။ [PubMed]
Durston S က, Davidson က M, စပါး N ကို, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Spicer J ကို, Fossella J ကို, Casey BJ ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ focal cortical လှုပ်ရှားမှုမှပျံ့ထံမှတစ်ဦးကပြောင်းကုန်ပြီ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2006;9: 1-20 ။ [PubMed]
Durston S ကိုသောမတ်စ် K ကိုယန် Y ကို, Ulug တစ်ဦးက, Zimmerman R ကို, Casey BJ ။ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တစ်ဦးကအာရုံကြောအခြေခံ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2002;5: 9-16 ။
အရှေ့ P ကို, Felice M က, မော်ဂန်အမ်ညီအစ်မ 'နှင့်မိန်းကလေး' 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားမွေးတယ်ဆိုတာအပြုအမူ: အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုဂျာနယ်။ 1993;55: 953-963 ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် Elkind ဃ Egocentrism ။ ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး။ 1967;38: 1025-1034 ။ [PubMed]
Eluvathingal T က, Hasan K ကို Kramer က L, ဖလက်ချာ J ကို, ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အသင်းအဖွဲ့နှင့်စီမံကိန်းအမျှင်၏ Ewing-Cobbs အယ်လ်ဘက်စုံပျံ့နှံ့ tensor tractography ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2007 ကြိုတင်မဲ Access ကိုဖေဖော်ဝါရီလ 16, 2007 အပေါ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Ennett S က, Tobler N ကို, Ringwalt ကို C, Flewelling R. မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုခုခံပညာရေးကိုဘယ်လိုထိရောက်မှုရှိသနည်း စီမံကိန်း Meta-analysis သည်ရလဒ်ကိုအကဲဖြတ်ဝံ့။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1994;84: 1394-1401 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ernst M က, နယ်လ်ဆင်အီး, Jazbec S က, လူယာ, E, ရဟန်းတော်ကို C, တိုနီဘလဲ R ကို, Leibenluft အီး, တိုနီဘလဲ J ကို, ထင်းရူးဃ Amygdala နှင့်နျူကလိယလူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်တုံ့ပြန် activation accumbens ။ Neuroimage ။ 2005;25: 1279-1291 ။ [PubMed]
Ernst M က, နယ်လ်ဆင်အီး, လူယာ, E, ရဟန်းတော်ကို C, Munson S က, Eshel N ကို, Zarahn အီး, Leibenluft အီး, Zametkin တစ်ဦးက, Towbin K ကို Charney: D, ထင်းရူးဃရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ရေးနှင့်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်: An fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychologia ။ 2004;42: 1585-1597 ။ [PubMed]
Ernst M က, လှံအယ်လ်ဆုကြေးစနစ်များကို။ ခုနှစ်တွင်: de Haan M က, ကို Gunnar M က, အယ်ဒီတာများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးမှ neuroscience ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ပုဒ်မ: D: စည်းမျဉ်းစနစ်များ: Motivation and စိတ်လှုပ်ရှားမှု။ နယူးယောက်: Guilford စာနယ်ဇင်း; စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
ကိုယ်ပိုင်၏ Gallagher အက်စ်ဒဿနပညာရှင်အယူအဆသိမြင်မှုသိပ္ပံများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2000;4: 14-21 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare T က, Davidson က M, Spicer J ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုအတွက် ventral frontostriatal circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2005;25: 8650-6 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare T က, Parra ကို C, Penn J ကို, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006;26: 6885-6892 ။ [PubMed]
Gardner EL ။ စွဲလမ်းမှု၏ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: ဓာတုမှီခိုအတွက်ကုထုံးမဟာဗျူဟာများအတွက်ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ၏ဂယက်ရိုက်။ ခုနှစ်တွင်: Elster J ကို, အယ်ဒီတာ။ စွဲ: Entries နှင့်ထွက်ပေါက်။ နယူးယောက်: စယ် Sage ဖောင်ဒေးရှင်းမှ; 1999 ။ စစ။ 57-119 ။
တစ်ဦးစမ်းသပ်လေ့လာမှု: Gardner က M, Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စွန့်စားမှု preference ကိုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအတွက်အောင်အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Peer ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2005;41: 625-635 ။ [PubMed]
အစိမ်းရောင် L ကို, Myerson J ကို, အသက်တမ်းတစ်လျှောက်နှောင့်နှေးဆုလာဘ်၏ Ostaszewski P. လျှော့: တစ်ဦးချင်းစီလျှော့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်ခေတ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ အမူအကျင့်လုပ်ငန်းစဉ်။ 1999;46: 89-96 ။
ဂရင်း J ကို, Nystrom L ကို, အိန်ဂျယ်တစ်ဦးက, Darley J ကို, Cohen ကိုဂျေကငျြ့ဝတျတရားစီရင်သိမြင်မှုပဋိပက္ခနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများ၏အာရုံကြောအခြေစိုက်စခန်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004;44: 389-400 ။ [PubMed]
Grosbras M က, Jansen က M, Leonard, G, McIntosh တစ်ဦးက, Osswald K ကို Poulsen ကို C, Steinberg L ကို, Toro R ကို, ခုခံ၏ pause တီဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစေ့စေ့ကြည့်ရှုရန်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2007;27: 8040-8045 ။ [PubMed]
ခန်းမ GS ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ နယူးယောက်: Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်း; 1904 ။
Harris ကနေ C, Jenkins M က, အန္တရာယ်အကဲဖြတ်အတွက် Glaser ဃကျားကွဲပြားခြားနားမှု: ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေယောက်ျားထက်နည်းပါးလာအန္တရာယ်များကိုယူသလဲ? တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ 2006;1: 48-63 ။
Heberlein တစ်ဦးက, အဒေါ့ဖ် R ကို, Tranel: D, Point-အလင်း Walker ကနေစိတ်ခံစားမှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏တရားစီရင်ပိုင်ဘို့ Damasio အိပ်ချ် cortical ဒေသများ။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;16: 1143-58 ။ [PubMed]
ဟိန်း K. ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ် Carnegie ကောင်စီ; 1988 ။
ဟော့ဖ်မန်းအီးမျက်နှာအမြင်များအတွက်ဖြန့်ဝေလူ့အာရုံကြောစနစ်မျက်စိအကြည့်နဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ Haxby ဂျေထူးခြားသောကိုယ်စားပြုသည်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2000;3: 80-84 ။
Hooper က C, Luciana M က, Conklin H ကို, ထိုအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုအပေါ် Yarger R. ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' စွမ်းဆောင်ရည်: ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့် ventromedial prefrontal cortex ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2004;40: 1148-1158 ။ [PubMed]
Ikemoto S က, အကျိုးသည်ဓာတုခလုတ်ဇုန်၏ပညာရှိ R. မြေပုံ။ Neuropharmacology ။ 2004;471 ဖြည့်စွက်: 190-201 ။ [PubMed]
Insel T က, Young က L ကို, Witt: D, သင်္ဘောသားဃ Gonadal steroids ဦးနှောက် oxytocin receptors အပေါ်ဝိရောဓိသက်ရောက်မှုရှိသည်။ Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ်။ 1993;5: 619-28 ။ [PubMed]
ဦးနှောက်လူမှုရေးသတင်းအချက်အလက် process လုပ်တယ်ဘယ်လို Insel T က, Fernald R. : လူမှုဦးနှောက်ရှာဖွေနေသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏နှစ်ပတ်လည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2004;27: 697-722 ။
ဂျွန်ဆင် R ကို, အရက်, ဆေးလိပ်, ဆေးခြောက်, ကိုကင်းများနှင့် 1919 ကတည်းကအမေရိကန်မွေးဖွားအလိုက်အခြားတ္ထုများအသုံးပြုခြင်း၏ Gerstein ဃ Initiation ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1998;88: 27-33 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kagan ကပြောပါတယ် J ကို, Snidman N ကို, Kahn V ကို, Towsley အက်စ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့နှစ်ခုမွေးကင်းစကလေးစရိုက်၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်။ SRCD Monographs ။ 2007 စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအပြောင်းအလဲနဲ့၏မြန်နှုန်းအတွက် Kail R. Developmental ပြောင်းလဲမှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1991;109: 490-501 ။ [PubMed]
အချိန်, ပုံရိပ်နှင့် Spatial မှတ်ဉာဏ်ထုတ်ယူခြင်း Kail R. ။ စမ်းသပ်ကလေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1997;64: 67-78 ။ [PubMed]
Keating ဃသိမှုနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု။ ခုနှစ်တွင်: Lerner R ကို, Steinberg L ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။2။ နယူးယောက်: Wiley; 2004 ။ စစ။ 45-84 ။
Killgore W က, မျက်နှာ၏ Yurgelun-Todd ဃသတိလစ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ လူမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2007;2: 28-47 ။ [PubMed]
Knoch: D, Gianotti L ကို, Pascual-Leone တစ်ဦးက, Treyer V ကို, et al M က, Hohmann M က, မှတ်။ အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းထပ်တလဲလဲ transcranial သံလိုက်ဆွနေဖြင့်ညာဘက် prefrontal cortex ၏နှောင့်အယှက်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူဖြစ်ပေါ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006;26: 6469-6472 ။ [PubMed]
Knutson B, Westdorp တစ်ဦးက, ခိုင်ဆာ E ကိုတစ်ငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု Hommer ဃ FMRI visualization ။ NeuroImage ။ 2000;12: 20-27 ။ [PubMed]
Lenroot R ကို, Gogtay N ကို, Greenstein: D, ဝဲလ်, E, Wallace, G, Clasen L ကို, Blumenthal J ကို, Lerch J ကို, Zijdenbos တစ်ဦးက, အီဗန်တစ်ဦးက, Thompson က P ကို, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်နေရာတွေမှာ၏ Giedd ဂျေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ။ Neuroimage ။ 2007 လိုင်းဧပြီလ 6, 2007 အပေါ်ရရှိနိုင်။
Lerner R ကို, Steinberg အယ်လ်အဆိုပါသိပ္ပံနည်းကျမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လေ့လာမှု: အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်, အနာဂတ်။ ခုနှစ်တွင်: Lerner R ကို, Steinberg L ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်။2။ နယူးယောက်: Wiley; 2004 ။ စစ။ 1-12 ။
Liston ကို C, Watts R ကို, စပါး N ကို, Davidson က M, Niogi S က, Ulug တစ်ဦးက, Casey BJ ။ Frontostriatal microstructure သိမြင်မှုထိန်းချုပ်အကျိုးရှိစွာစုဆောင်းမှု modulates ။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2006;16: 553-560 ။ [PubMed]
Luna B, Thulborn K ကို Munoz: D, Merriam အီး, Garver K ကို Minshew N ကို, et al ။ ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေဦးနှောက် function ကို၏ရင့်ကျက်မှတ်ဉာဏ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ subserves ။ Neuroimage ။ 2001;13: 786-793 ။ [PubMed]
မာတင်ကို C, ကယ်လီ T က, et al Rayens M က, Brogli B, Brenzel တစ်ဦးက, စမစ် W က။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ရှာကြံ Sensation, အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်နီကိုတင်း, အရက်နှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း။ ကလေးအမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2002;41: 1495-1502 ။ [PubMed]
Matthews က S, Simmons တစ်ဦး, ယာဉ်ကြောက S, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens ၏ Paulus အမ်ရွေးချယ် activation ။ NeuroReport ။ 2004;15: 2123-2127 ။ [PubMed]
မေလ J ကို, Delgado M က, Dahl R ကို, Fiez J ကို, Stenger V ကို, ရိုင်ယန် N ကကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆုလာဘ် related ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု, Carter က C. Event-related fMRI ။ ဟားဗတ်။ 2004;55: 359-366 ။ [PubMed]
လူယာက S, Laibson: D, Loewenstein, G, Cohen ကိုဂျေသီးခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုချက်ချင်းတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 2004;306: 503-507 ။ [PubMed]
Miller က Ozimek, G, Milner R ကို, အရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ hypothalamus အတွက်သားအိမ် steroids နေဖြင့်အာရုံခံ oxytocin mRNA ၏ Bloom အက်ဖ်စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ PNAS ။ 1989;86: 2468-2472 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Millstein S ကို, အန္တရာယ်နှင့်အားနည်းချက်၏ Halpern-Felsher ခသဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2002;31S: 10-27 ။ [PubMed]
Morse ကအက်စ်ဦးနှောက် overclaim နှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်: တစ်ဦးကရောဂါရှာဖွေမှတ်ချက်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်ဂျာနယ်။ 2006;3: 397-412 ။
Nation က M, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ကဘာလဲ Crusto ကို C, Wandersman တစ်ဦးက, Kumpfer K ကို Seybolt: D, Morrissey-ကိန်းအီး, Davino K. : ထိရောက်သောကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်များ၏အခြေခံမူ။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်။ 2003;58: 449-456 ။ [PubMed]
အမျိုးသားသုတေသနကောင်စီ။ အဆိုပါအမူအကျင့်များနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံကနေအလှူငှမြေား: ဆယ်ကျော်သက်မော်တာပျက်ကျကာကွယ်ခြင်း။ ဝါရှင်တန်: အမျိုးသားအကယ်ဒမီစာနယ်ဇင်း; 2007 ။
နယ်လ်ဆင်အီး, လူယာ, E, Parrish J ကို, Leibenluft အီး, Ernst M က, Fox က N ကို, ထင်းရူးဃ မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ရွယ်တူလူမှုရေးလက်ခံမှုအခြေခံဦးနှောက်စနစ်များကို။ ခံစားချက်နှင့်တော့ပူပန် Disorders အစီအစဉ်, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု, ဝါရှင်တန်: 2007 ။ အတည်မပြုရသေးသောလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
နယ်လ်ဆင်စိတ်ခံစားမှုမျက်နှာများ၏သွယ်ဝိုက် encoding ကနေစဉ်အတွင်းအာရုံခံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက် E ကို, လူယာ, E, ရဟန်းတော်ကို C, Zarahn အီး, Leibenluft အီး, ထင်းရူး D ကို, Ernst အမ် Developmental ကွဲပြားခြားနားမှု: တစ်ခုကအဖြစ်အပျက်-related fMRI လေ့လာမှု။ ကလေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်မဟာမိတ်စည်းကမ်း။ 2003;44: 1015-1024 ။
နယ်လ်ဆင်အီး, Leibenluft အီး, လူယာ, E, ထင်းရူးဃမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး Re-orientation ကို: လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် psychopathology ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းအပေါ်တစ်ဦးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 2005;35: 163-174 ။ [PubMed]
Ochsner K ကို Bung S က, စုစုပေါင်း J ကို, Gabrieli ဂျေပြန်လည်စဉ်းစားခံစားချက်တွေကို: စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002;14: 1215-1229 ။ [PubMed]
Overton ဒဗလျူကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ: ယုတ္တိဆင်ခြင်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ကန့်သတ်။ ခုနှစ်တွင်: Overton W က, အယ်ဒီတာ။ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်, လိုအပ်ချက်နှင့်ယုတ္တိဗေဒ: Developmental အမြင်များ။ Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1990 ။ စစ။ 1-32 ။
Patton J ကိုစတန်းဖို့ဒ် M က, အ Barratt Impulse စကေး၏ Barratt အီး Factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1995;51: 768-774 ။ [PubMed]
pause တီပုံထုတ်ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ရငျ့နှင့်သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2005;9: 60-68 ။ [PubMed]
pause T က, Toro R ကို, Leonard, G, Lerner J ကို, Lerner R ကို, Perron M က, ပိုက်, G, ပို L ကို, Steinberg L ကို, Veillette S ကိုမှအနိမ့်နှင့်မြင့်မားသောခုခံနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်အရေးယူ-လေ့လာရေး cortical ကွန်ယက်၏ Pausova Z. Morphological ဂုဏ်သတ္တိများ သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ လူမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
Pellegrini အေဒီ, Long က JD ။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှု၏တစ်ဦးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေးသီအိုရီ longitudinal ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စမ်းသပ်ကလေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2003;85: 257-278 ။ [PubMed]
Phelps အီး, O'Connor K ကို Cunningham W က, Funayma အီး, Gatenby J ကို, ဂိုး J ကို, Banaji အမ်စွမ်းဆောင်ရည်ပြိုင်ပွဲအကဲဖြတ်၏သွယ်ဝိုက်အစီအမံအပေါ်လှုပ်ရှားမှု amygdala ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2000;12: 1-10 ။
Prinstein M က, Mead က C, Cohen ကို G. အဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပါးစပ်လိင်, သက်တူရွယ်တူကျော်ကြားမှုနှင့်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများက '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သဘောထားအမြင်။ ကလေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2003;28: 243-249 ။ [PubMed]
အဆင့် J ကို, ယာဉ်ကြော D ကို, မျောက်လွှဲကျော်က F, ဂျရတ်အမ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Self-ဝိညာဏ်: longitudinal အသက်အရွယ်အပြောင်းအလဲများနှင့်နှစ်ဦးကိုအလိုက်အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်။ 2004;14: 1-21 ။
Rilling J ကို, Gutmans: D, Zeh T က, Pagnoni, G, Bern, G, Kilts CD တချပ်ဖြစ်တယ်။ လူမှုရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်တစ်ဦးကအာရုံကြောအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002;35: 395-405 ။ [PubMed]
ယင်းရာဇသံကိုဂိမ်းထဲမှာစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ Sanfey တစ်ဦးက, Rilling J ကို, Aronson J ကို, Nystrom L ကို, Cohen ကိုဂျေဒီအာရုံကြောအခြေခံ။ သိပ္ပံ။ 2003;300: 1755-1758 ။ [PubMed]
Schulz K ကို Sisk C. Pubertal ဟော်မုန်းသည်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူများ၏ရငျ့: ဆီးရီးယားဟမ်းစတားကနေသင်ခန်းစာ။ မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2006;254-255: 120-126 ။
Simons သည်-Morton B, Lerner N ကို, အဆိုတော်ဂျေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ယာဉ်မောင်းများ၏အန္တရာယ်များမောင်းနှင်မှုအပြုအမူအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်ခရီးသည်များ၏သက်ရောက်မှုများလေ့လာသည်။ မတော်တဆသုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး။ 2005;37: 973-982 ။ [PubMed]
Sisk ကို C, Foster ဃအပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အာရုံကြောအခြေခံ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004;7: 1040-1047 ။
Sisk ကို C, Zehr ဂျေ Pubertal အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူစည်းရုံး hormones ။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2005;26: 163-174 ။ [PubMed]
Smith ကအီး, Udry J ကို, မောရစ် N. Pubertal ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မိတ်ဆွေများက: ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခု biosocial ရှင်းပြချက်။ ကနျြးမာရေးနှငျ့လူမှုရေးအပြုအမူများ၏ဂျာနယ်။ 1985;26: 183-192 ။ [PubMed]
လှံကိုအယ်လ်အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသောက်: ဇီဝကိုအသုံးပြုရန်အတွက် propensity ၏အခြေခံနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအရက်။ အရက်အပေါ်လေ့လာရေးဂျာနယ်။ 2002; (14): 71-81 ။
လှံကို P. အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000;24: 417-463 ။ [PubMed]
Steinberg အယ်လ်ကျနော်တို့အချို့သောအရာတို့ကိုသိ: ပြန်ပြောင်းကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်နှင့်အလားအလာကိုအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်-မိဘဆက်ဆံရေး။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်။ 2001;11: 1-20 ။
Steinberg အယ်လ်သိမှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ သိမှုသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2005;9: 69-74 ။ [PubMed]
ဆယ်ကျော်သက်သိမြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လေ့လာမှုမှ Steinberg L. တစ်ဦးကချဉ်းကပ်မှုအသစ်; ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အစည်းအဝေးတွေမှာ: "ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သိမှုဖွံ့ဖြိုးရေး၏လေ့လာမှုတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုအသစ်က The MacArthur Juvenile စွမ်းဆောင်ရည်လေ့လာမှု"; ဆိုတဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်တင်ပြစက္ကူ San Francisco က။ မတ်လ, 2006 ။
Steinberg L. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ 8 ။ နယူးယောက်: McGraw-Hill က; 2008 ။
Steinberg L ကို, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် psychopathology အပေါ် Belsky ဂျေတစ်ဦးက sociobiological ရှုထောင့်။ ခုနှစ်တွင်: Cicchetti: D, Toth S က, အယ်ဒီတာများ။ Developmental Psychopathology အပေါ် Rochester စာတမ်းဖတ်ပွဲ။ vol ။7။ Rochester, NY: Rochester စာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; 1996 ။ စစ။ 93-124 ။
Steinberg L ကို, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်တရား၏ Cauffman အီး Maturity: ဆယ်ကျော်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ။ ဥပဒေနှင့်လူ့အပြုအမူ။ 1996;20: 249-272 ။
Steinberg L ကို, Cauffman အီး, Woolard J ကို, ဂရေဟမ်က S, Banich အမ် အရွယ်မရောက်သေးသူ '' ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှဝင်ရောက်ခွင့်, ထိုလူငယ်သေဒဏ်, နှင့်စွပ်စွဲယား "လှန်လာသောသေတ္တာ" ။ 2007 ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်လျော့နည်းရင့်ကျက်ဖြစ်ပါသလား လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
Steinberg L ကို, ချိန်ဂျေ 2006 အတည်မပြုရသေးသောကုန်ကြမ်းဒေတာ။
Steinberg L ကို, Dahl R ကို, Keating: D, Kupfer: D, Masten တစ်ဦး, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ထင်းရူးဃ Psychopathology: အခြေအနေတွင်၏လေ့လာမှုနှင့်အတူအကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience ပေါင်းစပ်ခြင်း။ Cicchetti: D, Cohen ကို: D, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ psychopathology, Vol ။ 2: Developmental မှ neuroscience ။ နယူးယောက်: Wiley; 2006 ။ စစ။ 710-741 ။
Steinberg L ကို, ဂရေဟမ်က S, O 'Brien L ကို, Woolard J ကို, Cauffman အီး, Banich အမ်ခေတ် Self-အစီရင်ခံစာနှင့်ယာယီလျှော့မှတဆင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်အနာဂတ်တိမ်းညွတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ 2007 လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
Steinberg L ကို, ရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှခုခံအတွက် Monahan K. ခေတ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
Tamm L ကို, Menon V ကို, တုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့်အတူဆက်နွယ်ဦးနှောက် function ကို၏ Reiss အေရင့်ကျက်။ ကလေးအမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2002;41: 1231-8 ။ [PubMed]
Teicher M က, Andersen က S နဲ့, striatum အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုအဘို့အ Hostetter ဂျေ, Jr အထောက်အထားသော်လည်းမ accumbens nucleus ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဦးနှောက်သုတေသန။ 1995;89: 167-172 ။ [PubMed]
semantic မှတ်ဉာဏ်၏ Thompson က-Schill အက်စ် Neuroimaging လေ့လာမှုများ: "ဘယ်လို" "ဘယ်မှာ" မှ Inferring Neuropsychologia ။ 2002;41: 280-292 ။ [PubMed]
Trenholm ကို C, Devaney B, Fortson K ကိုစီးတံတား L ကို, ဝီဂျေ, Clark ကအမ် လေးခေါင်းစဉ် V ကို၏သက်ရောက်မှု, ပုဒ်မ 510 Abstinence ပညာရေးအစီအစဉ်များ။ Princeton, NJ: သင်္ချာဘာသာရပ်ပေါ်လစီသုတေသန; 2007 ။
Tribollet အီး, Charpak S က, Schmidt ကတစ်ဦး, ဒူဘွာ-Dauphin M က, Dreifuss ဂျေပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့်သန္ဓေသားအတွက် receptors oxytocin ၏ယာယီစကားရပ်, မွေးကင်းစကလေးနှင့် autoradiography နှင့် electrophysiology နေဖြင့်လေ့လာခဲ့ peripubertal ကြွက်ဦးနှောက်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1989;9: 1764-1773 ။ [PubMed]
Udry ဂျေဟျောမုနျးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်များ၏လူမှုရေးပြဌာန်းခွင့်။ ခုနှစ်တွင်: Bancroft J ကို, အယ်ဒီတာ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အပျိုဖော်ဝင်။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1987 ။ စစ။ 70-87 ။
Walker ကအီး, Sabuwalla Z ကို, Huot R. Pubertal neuromaturation, စိတ်ဖိစီးမှု sensitivity ကိုနှင့် psychopathology ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Psychopathology ။ 2004;16: 807-824 ။ [PubMed]
Waraczynski အမ်ဆုလာဘ်အဘိုးပြတ်အခြေခံတဲ့အဆိုပြုထားဆားကစ်ကြောင့်ဗဟိုတိုးချဲ့ amygdala ကွန်ယက်ကို။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2006;30: 472-496 ။ [PubMed]
ဝီလျံ P ကို, Holmbeck, G, Greenley R. ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျန်းမာရေးစိတ်ပညာ။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2002;70: 828-842 ။ [PubMed]
Wilson က M ကိုလူပျိုတို့အကြား Daly အမ်သေစေလောက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်အကြမ်းဖက်မှု။ ခုနှစ်တွင်: ဘဲလ် N ကို, ဘဲလ် R ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-တာ။ Newberry ပန်းခြံ,, CA: Sage; 1993 ။ စစ။ 84-106 ။
Winslow J ကို, လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှု၏ Insel တီ Neuroendocrine အခြေခံ။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2004;14: 248-253 ။ [PubMed]
Zimring အက်ဖ် အမေရိကန်လူငယ်အကြမ်းဖက်မှုများ။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
Zuckerman က M, Eysenck S က, Eysenck HJ ။ Cross-ယဉ်ကျေးမှု, အသက်အရွယ်, နှင့်လိင်နှိုင်းယှဉ်: အင်္ဂလန်နှင့်အမေရိကားအတွက်ရှာကြံ Sensation ။ အတိုင်ပင်ခံနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1978;46: 139-149 ။ [PubMed]